Art is My Life: April 2007
ဒါပေမယ့် ခရီး ဆက်သွားရမယ်
မကွေး ကို ကြာမယ် တစ်ပတ်လောက်
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 3:25 PM 1 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရန်ကုန်မှာ အိုက်လို့ :D
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 1:25 AM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
မဂျစ်က ကစားခိုင်းတော့လည်း ကစားရတာပေါ့လေ
( ၁ ) ကျွန်တော်သည် ဆန် နို့ဆီဘူး နှစ်လုံးချက်ကို ဘာဟင်းမှမပါပဲ ကုန်အောင် စားနိုင်သူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ( မယုံ ကြည်သူများ ဆန်နို့ဆီဘူး နှစ်လုံး အကုန်ခံ၍ စမ်းသပ်နိုင်ပါသည် )
( ၂ ) ကျွန်တော်သည် ဆော်ကြည် မကြည်တော့ မသိပါ အခြောက်တွေကတော့ ကျွန်တော့ကို တော်တော်လေး ကြွေကြသည်။ ( မယုံလျှင် မာမီရန်ကို သွားရောက် မေးကြည့် ကြပါကုန်)
( ၃ ) ကျွန်တော်သည် မိန်းကလေးများ စိတ်ကောက်လျှင် မချော့တတ်ပါ။ ( မယုံလျှင် သက်မွန်မြင့်ကို သွားမေးပါ )
( ၄ ) ကျွန်တော်သည် အိပ်ရေး ပုတ်သူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ( ဒုတိယနှစ် စာမေးပွဲ ဖြေမည့် နေ့တွင် အဆောင်တွင် ကောင်းစွာ အိပ်ခဲ့ ဘူးပါသည် )
( ၅ ) ကောင်မလေးများ စွာသည် သူတို့၏ လက်ကို ကျွန်တော့်အား ကြည်ဖြူစွာ အတင်းကိုင် ခိုင်းကြသည်။ ( လက္ခဏာဟောခြင်း အတတ်ကို ကျွမ်းကျင်စွာ ဖြီးတတ်အောင် သင်ခဲ့ ခြင်း၏ အကျိုးဆက်ခံစား ရခြင်းဖြစ်ပါသည် )
( ၆ ) ကျွန်တော်သည် အောင်သွယ်ခြင်း အလုပ်ကို တစ်ဖက်ကမ်း ခတ်အောင် တတ်မြောက်ထား သူဖြစ်သည်။ ( အလုပ်ရှင် သမီးနှင့် သူငယ်ချင်းတို့ ထွက်ပြေးကြရာဝယ် ကျွန်တော်သည် အလုပ် ထုတ်ခြင်း ခံခဲ့ရဖူးပါ၏ )
( ၇ ) ကျွန်တော်သည် ကွန်ပြူတာကီးဘုတ် နိပ်သည့် အကျင့်ကား တခါတံရံတွင် ဖိနပ်စင်ကိုပင် ကီးဘုတ်ထင်ပြီး နိပ်နေတတ်ပါသည်။ ( ယင်းအကျင့်သည် ဘတ်စ်ကားပေါ်အထိ လိုက်လာချိန်တွင် ................. )
( ၈ ) ကျွန်တော်သည် မျက်စိမကောင်းသူ တစ်ဦးဖြစ်သည် ။ ( တခါတရံတွင် Gent နှင့် Lady ကို မှန်ကန် အောင်မဖတ်နိုင်သည့် အခါ ....................... )
( ၉ ) ကိုယ့်ဆီက ပိုက်ဆံ လာချေးသူက ပိုက်ဆံချေးရန် နိဒါန်းပြိုးနေချိန်တွင် ကျွန်တော်သည် သူ့ထံမှ ပိုက်ဆံချေးပါရန် တောင်းဆိုပြီးသာ ဖြစ်နှင့်သည်။
( ၁၀ ) ကျွန်တော်သည် ............. ငပျင်းတစ်ကောင်ဖြစ်သည်။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 1:27 AM2ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ကျွန်တော် ရန်ကုန် ရောက်ခါစက တုန်းကပေါ့ဗျာ။ အဲဒီတုန်းက အခုလိုမျိုး ကားတွေကလဲ မကျပ်သေးဘူးဗျ။ ခပ်ချောင်ချောင်ပဲ။ ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ ကောင်ကလဲ ရန်ကုန် ကိုရောက်ရောက်ခြင်း အငြိမ်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ သင်တန်းလေး မတောက်တခေါက်တက် အတန်းဆင်းရင် အိမ်မပြန်သေးဘူး ဘတ်စ်ကား လျှေက်စီးနေတာပေါ့။ အခုလဲ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး သက်မွန်မြင့် အိမ်က အမှတ် ၁၀ ဇောတိက လမ်းမှာလို့ နယ်မှတုန်းက ဖတ်ရတဲ့ မြင်ကွင်းမဂ္ဂဇင်းမှာ ပါလို့ သွားရှာကြည့်တာ။
ကျွန်တော်က တစ်ယောက်တည်း မသွားတတ်တော့ အူကြောင်ကြောင် ရန်ကုန်သား တစ်ကောင်ကို ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ သူကလဲ ရန်ကုန်သား လို့သားပြောတယ် ဆူးလေကနေ မြေနီကုန်းကို ဘာကား ရောက်လဲ ဆိုတာမသိဘူးတဲ့။ ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်တော်က ဦးဆောင်ပြီး သက်မွန်မြင့် အိမ်ရှာပုံတော် ခရီးကို ကျွန်တော်ရယ် ရန်ကုန်သား တစ်ကောင်ရယ် ထွက်လာကြတယ်ပေါ့။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်တောက ၁၈နှစ် လောက်ပဲရှိသေးတယ် ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကပါ။ ရင်ခုန်တတ်စ အချိန်ပေါ့။ :D
ဒီလိုနဲ့ မြို့တော်ခန်းမကနေ ၄၅ ဘတ်စ်ကားကြီး စီးပြီးချီတက်ခဲ့ကြတာ ပဲခူးကလပ် မှတ်တိုင်ကျော်တော့ ဆင်းခါနီးပြီလေ။ ဒါကြောင့် အပေါက်နားလေမှာ လာရပ်နေလိုက်တယ်။ ဇတ်လမ်းက အဲဒီနေရာမှာ စတွေ့တာပဲ။
ကျွန်တော့်အရှေ့မှာ ဟယ်ပင်မှာ ဆင်းမလို့ ဆိုပြီး ရပ်နေတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ ကောင်မလေးက အင်္ကျီအနီရောင်လေးကို ၀တ်ထားပါတယ်။ အသားအရေက ဖြူတာလဲ မဟုတ်ဘူး။ ၀ါတာလဲ မဟုတ်ဘူး။ မင်းလူရဲ့ ပြောတိုင်းယုံတဲ့ပုတ်သင်ညို ဇတ်လမ်းထဲက စိမ်းဖန့်ဖန့် အသားရေလေး ဆိုတာ ဒီလို ကောင်မလေး မျိုးကို ပြောတာ ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဗျ။ အင်း ကိုလုံးကို ပေါက်ကို ပြောရရင်လဲ မိုးဟေကို ရှုံးတယ်ဗျာ။ ရေမွေးနံ့လေးကလဲ သင်းလို့။ အရေးထဲမှာ ကားကပြိုင်မောင်းနေတာ ဆိုတော့ ခရီးရောက်တာက လဲမြန်လိုက်တာ ဟယ်ပင်ကို ရောက်သွားပြီ။
ကားစပါယ်ယာက တခါဖွင့်ပြီး ဆင်းဆင်းလဲ ဆိုရော ကောင်မလေးက အတင်းဆင်းပြေးပါတယ်။ ခက်တာက သူတစ်ယောက်တည်း ဆင်းတာ မဟုတ်ဘူး ကျွန်တော့လက်ကို ကိုင်ပြီး ဆွဲပြေးသွားတာ။ ( တာရာမင်းဝေရေးတဲ့ ၀တ္ထုထဲမှာလဲ ကျွန်တော့်လိုပဲ ဇတ်လိုက်မင်းသားကို မင်းသမီးက လက်ဆွဲပြီး ဆင်းပြေးသွားတာ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့အဖြစ်ပျက်က ၂၀၀၃ တုန်းက သူစာအုပ်က ၂၀၀၆ မှထွက်တာ။) ကျွန်တော်လဲ ရင်တွေခုန်လိုက်တာမှ ငါဟုတ်ရဲ့လားပေါ့ ခြေဖျားတွေ တောင်အေးသွားတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဘတ်စ်ကားပေါ်ကနေ ဆင်းပြီး ပလက်ဖောင်းပေါ်တက် မိတယ်ဆိုပြီပဲ ။ ဟေ့ကောင်မ ဟေ့ကောင်မ ဥာဉ်း ဘယ်သူ့ကို ခိုးပြေးမလို့ ငါကဒီမှာဟဲ့ ဆိုပြီး အသံကြား လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သိတယ်လေ ဒါက ကျွန်တော်နဲ့ မှားတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်း နောက်ကလိုက်လာတာပါ။ ကျွန်တော်လဲ အသံရာကို လည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ အနောက်က ခေါ်နေတာ မိန်းကလေးလားလို့ မိန်းမရှာကြီး ပါလား ။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော့် လက်ကို ဆွဲထားတဲ့ ကောင်မလေးက မိန်းမရှာနဲ့ ဘာလို့ တွဲရတာလဲ လို့တွေးပြီး လက်ကိုင်ထားတဲ့ ကောင်မလေး ဘက်ကို ပြန်လည့် လိုက်တော့ .... ..... ....
အခြောက်ပုံစံ ကြည့်ရတာ ရိုးရိုးအခြောက်တောင် ဟုတ်ဟန်မတူဘူး ပရှော်ဖက်ရှင်နယ် အခြောက်နဲ့တူတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တကိုယ်လုံးကို မိန်းမနဲ့ တူအောင်ပြင်ထားတာကို။ ပြင်လို့မရတာက ချိုင့်ခွက်နေ့တဲ့ သူမျက်နှာကြီးနဲ့ ကွမ်းစားထားတဲ့ သွားကြီးပါပဲ။ သူက လည့်ပြီး ကျွန်တော့ကို ပြောလိုက်ပါသေးတယ်။ ဆောရီးကိုကို တဲ့ ..........
အဲဒီနေ့က သက်မွန်မြင့် အိမ်လဲ ရှာလို့ မတွေ့လိုက်ဘူး။ အရေးထဲမှ ကားပေါ်ပါသွားတဲ့ ရန်ကုန်သားကို လိုက်ရှာရတာလဲ မောလို့။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 1:41 AM5ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ကျွန်တော်သည် ဘ၀တွင် ထီတစ်ကြိမ် ပေါက်ဖူးပါ၏။ ထိုနေ့သည် ကျွန်တော့၏ အပျော်ဆုံးနေ့ တစ်နေ့ ဖြစ်ခဲ့သည်။
ထိုနေ့က ကျွန်တော် ထိုးထား သောထီလက်မှတ် လေးကို ကိုင်၍ ထီနံပါတ် ကြေငြာမည့် အချိန်ကို စောင့်နေခဲ့သည်။
ထီပေါက်မဲနံပါတ် ကြေငြာသူသည် ကျွန်တော့၏ နာမည်လေးလုံးကို အတိအကျ ရွတ်ဆို ကြေငြာခဲ့သည်။
ကျွန်တော်၏ ၀မ်းသာမူများက ပြောနိုင်ဖွယ်ရာ မရှိခဲ့ပါချေ။ အဲဒီအချိန်က ကျွန်တော့ လက်ထဲမှာ လော်စပီကာ တစ်လုံးသာရှိခဲ့ရင် ကျွန်တော်ထီပေါက်ပြီ ဗျို့လို့ ရန်ကုန် တခွင်တွင် လည့်လယ် ကြေငြာဟစ်ကြွေးလိုက် ချင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်တော်၏ ၀မ်းသာမူများက အဲဒီအချိန်မရောက်မှီ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။
ယင်းပေါက်မဲနံပါတ်ကို မကြေငြာခဲ့ဘူးလို့ သဘောထားရန် ကြေငြာသူက ပြောခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် ယင်းဆုကို ရာသက်ပန် ပယ်ချလိုက်သည် မဟုတ်ပဲ ဆန္ဒရှိသည့် အချိန်တွင် ယင်းနံပါတ်ကို ရုံးတော်သို့ လာရောက်တင် ပြနိုင်သည်။ ရုံးတော်မှလဲ ဆန္ဒရှိသည့် အချိန်တွင် ပေါက်မဲကို ထုတ်ပေးမည်။ အစီစဉ် ကြေငြာသူက ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုအချိန်တွင်မူ ပေါက်မဲ ကြေငြာချက်ကို ဖျက်သိမ်းထားပါသည်။
အကြောင်း ပြချက် လုံးဝမရှိပါ
ရုံးတော်၏ ကြေငြာချက်အရ ကျွန်တော်သည် ကန့်ကွက်ရန် ဆန္ဒမရှိပါ။ ၀မ်းနည်းခြင်းလဲ အလျှင်းမရှိတော့ပါ။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် ရုံးတော်၏ ဆန္ဒသည် ကျွန်တော်၏ ဆန္ဒဖြစ်သည် ရုံးတော် ကြေနပ်လလျှင် ကျွန်တော်ပျော်ပါသည်။ ရုံးတော် ပူဆွေးလျှင် ကျွန်တော်လဲ သောကောရောက်မည်။
သူမ၏ ပျော်ရွင်ခြင်းသည် ကျွန်တော်၏ ဘ၀တစ်ခု ဖြစ်ပါတော့သည်
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 8:50 PM 1 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ဖတ်ဖို့ မဲကျသည့် ဘလော့များ
1 . http://181bayintnaung.blogspot.com/
2 . http://7monkeys.blogspot.com/
3 . http://aclmdy.blogspot.com/
4 . http://ainchannmyay.blogspot.com/
5 . http://a-lwan-dway-wai.blogspot.com/
6 . http://ainmetdiary.blogspot.com/
7 . http://angwei.blogspot.com/
8 . http://arloo.blogspot.com/
9 . http://arrbyai.blogspot.com/
10 . http://artixlin.blogspot.com/
11 . http://art-of-myheart.blogspot.com/
12 . http://ashinkumara.blogspot.com/
13 . http://aungsophia.blogspot.com/
14 . http://awlanmg.blogspot.com/
15 . http://ayeayethaw.blogspot.com/
16 . http://bagannat.blogspot.com/
17 . http://barnyarbarnyar.blogspot.com/
18 . http://bloggerlay.blogspot.com/
19 . http://bo5.blogspot.com/
20 . http://bobohein.blogspot.com/
21 . http://bowdawgyi.blogspot.com/
22 . http://byteordermyanmar.blogspot.com/
23 . http://chitlaypyay.blogspot.com/
24 . http://chitsanm.blogspot.com/
25 . http://cmsmdy.blogspot.com
26 . http://cyberclay.blogspot.com/
27 . http://dathana.blogspot.com/
28 . http://deedoke.blogspot.com/
ကိုကျော်ဇေယျ တောင်ဆိုမူကြောင့် နောက်ထပ် တိုးသွားသည့်စာရင်း
154 . http://toplaceoftrust.blogspot.com/
155 . http://uhteik.blogspot.com/
156 . http://uniquealert.blogspot.com/
157 . http://waiwai.blogspot.com/
158 . http://waiyanlin.blogspot.com/
159 . http://waiyanlinn.blogspot.com
29 . http://dewy-eyes.blogspot.com/
30 . http://dr-junior.blogspot.com/
31 . http://edwardwitten.blogspot.com/
32 . http://emotionalcorner.blogspot.com/
33 . http://ems-dailydiary.blogspot.com/
34 . http://flammablesan.blogspot.com/
35 . http://flower.colorfulblog.com/
36 . http://generation96.blogspot.com/
37 . http://gyittu.blogspot.com/
38 . http://hay-mar.blogspot.com/
39 . http://heinnge.blogspot.com/
40 . http://hohodidi.blogspot.com/
41 . http://htetyeemon.blogspot.com/
42 . http://htoolaminn.blogspot.com/
43 . http://htoomyatbg.blogspot.com/
44 . http://joutblize.blogspot.com/
45 . http://julyhtet.blogspot.com/
46 . http://justshareall.blogspot.com/
47 . http://kadaung.blogspot.com/
48 . http://kgmalayy.blogspot.com/
49 . http://khantzawaung.blogspot.com/
50 . http://khunmoung.blogspot.com/
51 . http://klosayhtoo.blogspot.com/
52 . http://komg.blogspot.com/
53 . http://kotoe.blogspot.com/
54 . http://kophyoe.blogspot.com/
55 . http://kyalsinsoewin.blogspot.com/
56 . http://kyawthu.co.uk/mmblues/
57 . http://kyaw-min-tun.blogspot.com/
58 . http://kyawswar.blogspot.com/
59 . http://kyaw-zay-ya.blogspot.com/
60 . http://kzy1980.blogspot.com/
61 . http://linletkyalsin.blogspot.com/
62 . http://madyjune.blogspot.com/
63 . http://mandalaybloggers.blogspot.com/
64 . http://maydar-wii.blogspot.com/
65 . http://meemeethawgyi.blogspot.com/
66 . http://melodymaung.blogspot.com
67 . http://mgalbert.blogspot.com/
68 . http://mghla.blogspot.com
69 . http://mgmyomin.blogspot.com/
70 . http://mgthantzin.blogspot.com/
71 . http://mgthuyein.blogspot.com/
72 . http://mgyoe.blogspot.com/
73 . http://minthetkhine.blogspot.com/
74 . http://mmhan.blogspot.com/
75 . http://mmposts.blogspot.com/
76 . http://moeminthar.wordpress.com/
77 . http://moeyanlwint.blogspot.com/
78 . http://mrdewaing.blogspot.com/
79 . http://mrprogrammer.blogspot.com/
80 . http://mindagoon.blogspot.com/
81 . http://myalwar.blogspot.com/
82 . http://myanmar-blogger.blogspot.com/
83 . http://myanmar-cartoon.blogspot.com/
84 . http://myanmargraphicartshow.blogspot.com/
85 . http://myanmarinternetseminar.blogspot.com/
86 . http://myanmaroa6.blogspot.com/
87 . http://myanmar-society.blogspot.com/
88 . http://myatlone.blogspot.com/
89 . http://mymyanmarpoem.blogspot.com/
90 . http://myanmarblogdirectory.blogspot.com/
91 . http://myanmarblues.blogspot.com/
92 . http://myanmarmodernpoems.blogspot.com/
93 . http://myatthura.blogspot.com/
94 . http://myatzawlynn.blogspot.com/
95 . http://mydaywalker.blogspot.com/
96 . http://mymetroworld.blogspot.com/
97 . http://mynetclass.blogspot.com/
98 . http://myoaung-mdy.blogspot.com/
99 . http://myochauhtun.blogspot.com/
100 . http://myokoko.blogspot.com/
101 . http://myonyi.blogspot.com/
102 . http://naing1.blogspot.com/
103 . http://natthi22.blogspot.com/
104 . http://naymin.blogspot.com/
105 . http://naynaynaing.blogspot.com/
106 . http://nayphonelatt.blogspot.com/
107 . http://nayyynzaraamyitkhan.blogspot.com/
108 . http://nineninesanay.blogspot.com/
109 . http://notes4pc.blogspot.com/
110 . http://nyilynnseck.blogspot.com/
111 . http://nyinyithanlwin.blogspot.com/
112 . http://oesociety.blogspot.com/
113 . http://pandora-and-pandora.blogspot.com/
114 . http://panpwintlay.blogspot.com/
115 . http://panpwintlay.blogspot.com/
116 . http://pawakayee.blogspot.com/
117 . http://peersmyanmar.wordpress.com/
118 . http://peoimyanmar.blogspot.com/
119 . http://phoawe.blogspot.com/
120 . http://phoungphoung.blogspot.com/
121 . http://phoxin.blogspot.com/
122 . http://phyowaiayeaung.blogspot.com/
123 . http://phyowaikyaw.blogspot.com/
124 . http://planetteam.blogspot.com/
125 . http://pyisoeyz.blogspot.com/
126 . http://rubbishpage.blogspot.com/
127 . http://sannoo.blogspot.com/
128 . http://saturngod.blogspot.com/
129 . http://shwemintharlay.blogspot.com/2007
130 . http://shwemoetain.blogspot.com/
131 . http://shwemyat.blogspot.com/
132 . http://sisain.blogspot.com/
133 . http://sithuhein.blogspot.com/
134 . http://smsy.blogspot.com/
135 . http://soemin.blogspot.com/
136 . http://soemoeaung.blogspot.com/
137 . http://soezeya.blogspot.com/
138 . http://splendidrose.blogspot.com/
139 . http://spotfm.blogspot.com/
140 . http://stevenalexand.blogspot.com/
141 . http://taikhint.blogspot.com/
142 . http://tartarlay.blogspot.com/
143 . http://tawthonetaung.blogspot.com/
144 . http://teslanetblog.blogspot.com/
145 . http://thachinmyar.blogspot.com/
146 . http://thantzinaung.blogspot.com/
147 . http://thelay.blogspot.com/
148 . http://thet2.blogspot.com/
149 . http://thetnaing.blogspot.com/
150 . http://thinzar00.blogspot.com/
151 . http://thuhninsee.blogspot.com/
152 . http://tkg-photographicdiary.blogspot.com/
153 . http://tmaung.blogspot.com/
သင်ဖတ်ဖို့ စောင့်မျော်နေသည့် ဘလော့များ
160 . http://walone.blogspot.com/
161 . http://www.mayvelous.com/
162 . http://www.nyeinchan.com/wordpress/
163 . http://xvariablex.blogspot.com/
164 . http://yanaung.blogspot.com/
165 . http://yangonthar.blogspot.com/
166 . http://yaw-han-aung.blogspot.com/
167 . http://yemon.blogspot.com/
168 . http://zarniminhtet.blogspot.com/
169 . http://zawmoeaung.blogspot.com/
170 . http://zawyenaing104.blogspot.com/
171 . http://zerotopic.blogspot.com/
172 . http://zincolatt.blogspot.com/
173 . http://zinnaung.blogspot.com/
174 . http://zinyaw.wordpress.com/
175 . http://zmpoems.blogspot.com/
ယင်းဘလော့များကို တာဝန်ယူ ဖတ်ပေးနိုင်မည် ဆိုပါက
mmblogbook@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်ပါ
ကျွန်တော်တို့ စာအုပ် ထုတ်ဝေရေးက သိထားတဲ့ စာရင်းက ဒါအကုန်ပါပဲ ။ တကယ်လို့များ ဒီထဲမှာ မပါသေးဘူးဆိုရင် မေးပို့လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် စီဘောက်မှာ အော်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြောကြားနိုင်ပါတယ်။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 4:36 AM 1 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
မမြဲခြင်းနိယမ အရ အရာခပ် သိမ်းသော အရာအားလုံး သည် တည်မြဲခြင်း မရှိကြပါ။
သို့ရာတွင် ဘာကြောင့် မမြဲခြင်းဆိုတဲ့ နိယမကြီးက တည်မြဲနေရတာလဲ။
တကယ်ဖြစ်ချင် တကယ်လုပ် အဟုတ်ဖြစ်ရမည် ဆိုတဲ့ စကားပုံ နေရာတိုင်းမှာ မှန်ပါ့မလား။
ထိုင်နေလို့ တော့ဘာမှ ဖြစ်မလာ ဘူးတဲ့။
ဘာမှန်တယ် ဟုတ်လား ဒါဆိုရင် ငါ ဘာမှ မလုပ်ပဲ ထိုင်ခဲ့တာ ဘာကြောင့်
ပင်လယ်ဒီရေတက်တာ လရဲ့ ဆွဲငင်အားကြောင့်လို့ ပြောကြတယ်။ လရဲ့ဆွဲအားက
ပင်လယ်ပြင်က ရေတွေကို ကြွတက်လာ ဆွဲနိုင်တယ် ဆိုရင် ဖန်ခွက်ထဲက ရေတွေကို
ဘာကြောင့် ကြွတက်လာအောင် မဆွဲတာလဲ။
လူများသည် မိမိကို ချစ်ခင်နှစ်သက် သာကို လိုလားကြသည်။ မှန်ပါသလား
မှန်တယ်ဆိုရင် အချို့သောလူများ သည် မိမိကို ချစ်ပါသည် လို့ပြောလာ
သောလူကို မုန်းကြသည်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 1:21 AM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရန်ကုန် ဧပြီ ၁၈
မြန်မာဘလော့ဂ်များ၏ မထမအကြီမ် တွေ့ဆုံ အစည်းဝေးကို ရန်ကုန်မြို့ ဘိုအောင်ကျော်လမ်းရှိ Coff King တွင် ယနေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီမှ ညနေ ၃ နာရီအထိ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အစည်းဝေးသို့ ညီလင်းဆက်၊ ညီညီသံလွင်၊ မျက်လုံး၊ နေဘုန်းလတ်၊ ဘာညာဘာညာ၊ Oa6 ၊ Ho My BLog ၊ ဇင်ကိုလတ် ၊ ဗလာဂေါက်၊ စိုးဇေယျ တို့တက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အစည်းဝေးတွင် စကာတင် စာမူစု ဆောင်ရေး ၊ နာမည်ရွေးချယ်ရေး ၊ ရံပုံ ငွေရှာဖွေရေး ၊ ဒီဇိုင်း ရွေးချယ်ရေး ၊ ဒက်လိုင်းနေ့ များသတ်မှတ်ရေး တို့ကို ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။
(၁)စာအုပ်ထုတ်ဝေရာတွင် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော ရံပုံငွေကို လုံလောက်စွာ ရှာဖွေနိုင်ရန် အတွက် Marketing အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
Marketing အဖွဲ့တာ ၀န်သည် စာအုပ် ကုန်ကျ စရိတ်များကို ကာမိရန် ကြော်ငြာ ကော်ခံ ခြင်းလုပ်ငန်းကို အဓိကတာ ၀န်ယူဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန် မြို့တွင်းရှိ စာအုပ်တွင် ကြော်ငြာ ထည့်သွင်းနိုင်မည် နေရာတွင် သွားရောက် စည်းရုံး ကောက်ခံရန် ဖြစ်သည်။
စိုးဇေယျ တို့ပါဝင် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ စီးပွားရေး ကြော်ငြာ ကောက်ခံ ပေးနိုင်သူ မည်သူ မဆို ယင်းအဖွဲ့ သို့ဝင်ရောက်ကူ ညီနိုင်ပါသည်။
http://www.myanmar-music.com/myanmarmusic/blogs.aspx ပါဘလောဂ်ကာ များကို အခြေခံ ၍ စကာတင် စာမူ စုဆောင်း ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ် ထုတ်ဝေရေး အဖွဲ့ သည်စာမူ များလာရောက် ပေးကြပါရန် တောင်ခံခဲ့သော်လည်း စာမူများ လာရေက်ပို့ ကြခြင်းမရှိသော ကြောင့် ယင်းလင့်ပါ ဘလော့ဂ်ကာ ၁၄၅ ဦးထံမှ စာမူများကို စကာတင် စုဆောင်းရန် အောက်ဖော်ပြ ဘလော့ကာများကို တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ ပါသည်။
Barnyar No 1 to7from http://www.myanmar-music.com/myanmarmusic/blogs.aspx
EainChanMyae No 8 to 14 from http://www.myanmar-music.com/myanmarmusic/blogs.aspx
GyitToo No 15 to 21 from http://www.myanmar-music.com/myanmarmusic/blogs.aspx
KyawZayYa No 22 to 28 from http://www.myanmar-music.com/myanmarmusic/blogs.aspx
MayDarWi No 29 to 35 from http://www.myanmar-music.com/myanmarmusic/blogs.aspx
Mr. Pooh No 36 to 42 from http://www.myanmar-music.com/myanmarmusic/blogs.aspx
MyatLone No 43 to 49 from http://www.myanmar-music.com/myanmarmusic/blogs.aspx
MyatMinnHan No 50 to 56 from http://www.myanmar-music.com/myanmarmusic/blogs.aspx
Nayphonelatt No 57 to 63 from http://www.myanmar-music.com/myanmarmusic/blogs.aspx
NineNineSaNay No 64 to 70 from http://www.myanmar-music.com/myanmarmusic/blogs.aspx
NyaLay No 71 to 77 from http://www.myanmar-music.com/myanmarmusic/blogs.aspx
NyiLinnSeck No 78 to 84 from http://www.myanmar-music.com/myanmarmusic/blogs.aspx
NyiNyi(thanlwin) No 85 to 91 from http://www.myanmar-music.com/myanmarmusic/blogs.aspx
SatonGod No 92 to 98 from http://www.myanmar-music.com/myanmarmusic/blogs.aspx
SoeZayYa No 99 to 105 from http://www.myanmar-music.com/myanmarmusic/blogs.aspx
Testla No 106 to 112 from http://www.myanmar-music.com/myanmarmusic/blogs.aspx
Thinzar No 113 to 119 from http://www.myanmar-music.com/myanmarmusic/blogs.aspx
WaiYanLinn No 120 to 126 from http://www.myanmar-music.com/myanmarmusic/blogs.aspx
YanAung No 127 to 133 from http://www.myanmar-music.com/myanmarmusic/blogs.aspx
Zaw Zaw No 134 to 140 from http://www.myanmar-music.com/myanmarmusic/blogs.aspx
Zinkolatt No 141 to the latest one from http://www.myanmar-music.com/myanmarmusic/blogs.aspx
ဥပမာအနေဖြင့် BarNyarNyar သည် http://www.myanmar-music.com/myanmarmusic/blogs.aspx တွင် ဖော်ပြထားသော ဘလော့ကာ နံပါတ် ၁ မှ ရ အထိရှိ ဘလော့ဂ်များကို အစအဆုံး ဖတ်ရူပြီး ဘလော့ကာ တစ်ဦးထံမှ လလော့ပို့ အနည်းဆုံး သုံခု ခု နှစ်ယောက်အတွက် ၂၁ ပို့ကို မေလ ၁၅ ရက်နေ့ နောက်ဆုံး ထားပြီး mmblogbook2.blogspot.com တွင်လာတင်ရ မည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအတွက် BarNyarbarNar သည် မိမိတာ ၀န်ယူ ဖတ်ရူရသော ဘလော့ကာ နှင့်ဆက်သွယ်ကာ မိမိသည် မည့်သည့်ပို့ ကိုယူမည်ဖြစ် ကြောင်း အကြောင်းကြားရပါမည်။ အကယ်၍စာ မူပိုင်ရှင် ဘလော့ဂ်ကာသည် ဘာညာယူ သွားသော စာမူ အပြင် မိမိနှစ်သက်သည့် ဘလော့ရှိပါကလဲ မိမိဆန္ဒအလျေက် mmblogbook@gmail.com သို့ပေးပို့နိုင်သည်။ သို့တည်းမဟုတ် မိမိစာမူ များယူသုံးခြင်းကို မကြေနပ်ပါက လည်းကန့်ကွက်နိုင်သည်။
ယခုပေးထားသော http://www.myanmar-music.com/myanmarmusic/blogs.aspx လင့်တွင် မိမိ အမည်မရှိ ပါကလည်းကောင်း သို့တည်းမဟုတ် စာမူစကာတင် စုဆောင်းရေးတွင် ၀င်ရောက်ဖတ်ရူ ကူညီနိုင်သူ ဖြစ်ပါက လည်းကောင်း mmblogbook@gmail.com သို့ ယုခုလ နောက်ဆုံးထား၍ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
စေတနာ ထက်သန်သူ မည်သူမဆို မိမိ တတ်နိုင်သလောက် ( အနည်းအများ ကတ်သတ်ချက် မရှိပါ ) မေလ ၃၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံး ပြီး စင်္ကာပူ hololu@gmail.com , မလေးရှား kzy1980@gmail.com , aungyan@gmail.com အမေရိကား
နေမျိုးကျော် ( ဘလော့ကာ အမည် နေဘုန်းလတ် )
၁၂ / ကတတ နိုင် ၀၂၆၀၁၃
အမှတ် ၁၅၄ ၊ ၃၈ လမ်းအလယ် ၊ ကျောက်တံတားမြို့ ။
ထိန်လင်းရွှေ ( ဘလော့ကာ အမည် စေတန်ဂေါ့) 09 80 22939
မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၁၂/ ကတတ နိုင် ၀၂၇၉၄၈
များထံတွင် ဆက်သွယ် ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ ရံပုံငွေ ထည့်သွင်းသူများသည် စာအုပ်အတွက် ထည့်သွင်းသည် ဟုမယူ စေလိုပဲ မြန်မာ ဘလော့အဖွဲ့ အစည်းမှ အနာဂတ်တွင် ပြုလုပ်မည့် Donation ရံပုံငွေ အတွက် ငွေကြေးလူဒန်း သည်ဟု မှတ်ယူပေး စေလိုပါသည်။
အဘယ့် ကြောင့်ဆို သော် စာအုပ်တွင် စာမူ အရေ အတွက် ခုနှစ်ဆယ်မှ ကိုးဆယ်ကြားသာ ထည့်သွင်းနိုင်ဖွယ်ရာ သာရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ဲမြန်မာ ဘလော့အဖွဲ့ အစည်းမှ အနာဂတ်တွင် ပြုလုပ်မည့် Donation ရံပုံငွေ အတွက် ငွေကြေးလူဒန်း သည်ဟု မှတ်ယူ မှသာ ပိုက်ဆံတော့ ထည့်ရတယ် စာမူတော့ မပါဘူး ဆိုသော ခံစားချက် များဖြစ်ပေါ်လာ ခြင်းမရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်၏ မြန်မာ ဘလော့အဖွဲ့ အစည်းကြီး အကောင်ထည် ပေါ်လာရန် မိတ်ဆွေကို သဒါတတ် အားသလောက် ပါဝင် ကူညီပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။
နာမည်ရွေးချက်ရေးကို တာဝန်ယူထား သော မအိမ့်ချမ်းမြေ့ ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ ယခုလကုန် နောက်ဆုံးထား၍ နာမည်ရွေးချယ်ပေးရန်။
နာမည်ရရှိလာပါက စာအုပ်ဒီဇိုင်း ရွေးချယ်ရေးတွင် တာဝန်ယူထား သောအဖွဲ့တွင် ညီလင်းဆက် ထပ်မံအား ဖြည့်ဝင်ရောက်ပြီး မေလ ၁၅ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားကာ အပြီးသတ် ဒီဇိုင်းတစ်ခုကို ပူးပေါင်းရေးဆွဲ ရွေးချယ်ပေး ရန်ဖြစ်ပါတယ်။
အမာခံ ဘလော့ဂ်ကာများ ထဲသို့ ကိုညီညီ (သံလွင်) ထပ်မံ ၀င်ရောက် အားဖြည့်လာပါတယ်။
စာမူဖောင်ပိတ်ရက်ကို မေလ ၁၅ သို့ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။
စာမူများကို မိမိဆန္ဒအလျေက် သော်လည်းကောင်း သူများရေးထားသည့်ပို့ကို ကြိုက်လျှင်သော်လည်းကောင်း ယင်းလင့်များကို mmblogbook@gmail.com သို့စာမူဖောင်ပိတ် ရက်ဖြစ်သည့် မေလ ၁၅ ရက်နေ့ နောက်ဆုံး ထားပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
(၁၀) စာမူဖောင်ပိတ်ပြီး နောက် စာမူရွေးချယ်ရေး အယ်ဒီတာ အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရှေ့ဆက်လုပ်သွား မည့်လုပ်ငန်း စဉ်များကို အသိပေးခြင်း
စာမူများကို အတည်ရွေးချယ် ပြီးသွားပါက၊ စာအုပ် အကြမ်းကို ထုတ်ပါမည်။ ယင်းစာ အုပ်အကြမ်းပြသ၍ Marketing အဖွဲ့က ကြောငြာလိုက်လံ ကောက်ခံပါမည်။ ကြော်ငြာများ အတည် ထည့်သွင်းပြီးပါက ဇန်လ ၁၅ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားကာ စာပေစိစစ်ရေး တင်ပါမည်။
ပြန်လယ် မေးမြန်းနိုင်သလို။ ယခု ဆုံးဖြတ်ချက် များထက် သောကောင်မွန် သောအကြံဥဏ်ရှိပါက လည်း မဝေးသော အချိန်အတွင်း ၀င်ရောက် ပြောကြားပေးကြပါရန်
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 10:02 PM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ယုခုထုတ်ပြန်သော အချက် အလက်များထဲမှာ မရှင်းလင်းနိုင်ဟု ယူဆရသော အချက်အလက်များကို ကိုရန်အောင်နဲ့ ကျွန်တော် စကား ပြေဟန်နှင့် ဖြေရှင်းပေးသွားပါမည်။
ရန်။ ။ ကိုစိုးဇေယျ ကျန်းခံသာလို့ မာပါစ
စိုး။ ။ ကိုရန်အောင် ပို့သတဲ့ မေတ္တာကြောင့် ကျန်းမာစွာရှိကြောင်းပါဗျ။ိုရန်အောင်ကြီးကော ဘယ်လိုတုန်း ကျမ္မာရဲ့လား
ရန်။ ။ နီကရိုးမလေးများ ပို့သသည့် မတ္တာကြောင့် ဒူးနာ ခါးကိုက် ... ကိုက် ....... အဲအဲမှားလို့ မိဘများ ပို့သတဲ့ မေတ္တကြောင့် ကျမ္မာကြောင်းပါဗျာ။ ဒါနဲ့ဗျာ စကားမစပ် ဒီနေ့ ရန်ကုန်မှာ ဘလော့ကာ တွေ အစည်းဝေးလုပ် ကြတယ် ဆိုဗျ။
စိုး။ ။ ဟုတ်ပ ကိုရန်အောင်ရေ
ရန်။ ။ ဘာတွေများ ထူးသတုန်းဗျာ
စိုး။ ။ အပေါ်မှာရေး ထားတယ်လေဗျာ ဖတ်ကြည့်ပေါ့
ရန်အောင် ခေတ္တမျှကြာ ဖတ်လိုက်သည်။
ရန်။ ။ ရန်ဟိုက်ရှား ပါးဖတ်လိုက်တာ မူးနေတာပဲ ဗျာ။ ရုပ်လွန်းလို့ ဘယ်ကနေ စမေးရမှန်း တောင်မသိတော့ဘူး။
စိုး။ ။ အင်းပြောကြည့်ပါဦးဗျ။ ဘာတွေ ရုပ်လို့လဲ
ရန်။ ။ မတ်ကက်တင်း ဖွဲ့တာတော့ထားလိုက်ပါ ပြောစရာ မရှိပါဘူး။ ဘလော့ကာ ၁၅၄ ယောက်ရဲ့ ဘလော့တွေကို ဘလော့ကာ တချို့က ၀င်ဖတ်ပြီးရွေးမယ်ဆိုတော့ ကျန်တဲ့လူတွေ ရွေးလို့ မရတော့ဘူးလား။
စိုး။ ။ ရွေးလို့ရတာပေါ့။ ရွေးတာကတော့ အရင်တိုင်းပဲ ဖတ်မိလို့ကြိုက်တာရှိရင် ပိုင်ရှင်ဆီက ခွင့်ပြုချက် တောင်ပြီးပို့လို့ရတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကိုရေးထားတာ ကိုယ်ကြိုက်တယ် ဆိုရင်လဲ ပို့လို့ရတယ်။ အခု ၁၃ ယောက်ကို သီးခြား တာဝန် ပေးလိုက်တယ် ဆိုတာ ပိုပြီး မြန်ဆန် သွားအောင် လို့ပါ။
ရန်။ ။ ဟာကို စိုးဇေယျကလဲ တချို့က စာအုပ်ထုတ် ဝေရေးမှာ တက်တက်ကြွကြွပါ ၀င်နေတဲ့ လူတွေ ရှိတယ် ဗျ။ အဲဒီ ၁၃ ယောက်လစ်ထဲမှာ ကို့နာမည် မပါတဲ့ အခါမှာ ဖီငုတ်ကြမှာပေါ့။
စိုး။ ။ ကိုရန် အောင်ရ ဒါကဒီလို ရှိပါတယ်။ ၁၃ ယောက်ဆိုတာ ဘိုင်သေ ထပ်မတိုး တော့ဘူးမဟုတ်ဘူး။ ဘာလို့ ၁၃ ယောက်ပဲ ရွေးထားတာလဲ ဆိုတော့ ဒီ၁၃ ယောက်ကတော့ သေချာ ပေါက်နံ့နံ့ စပ်စပ် ဖတ်ပေးနိုင်ပါတယ် လို့ပြောလာတဲ့ လူတွေပါ။
ဒါပြင် တစ်စု တစ်ယောက်က ကျွန်တော်လဲ ဘလော့တွေကို နံ့နံ့ စပ်စပ် ၀င်ဖတ်ပြီးေ၇ွးပေး နိုင်ပါတယ် ဆိုရင် လာပြောပါ ကျွန်တော်တို့ က Welcome ပဲ။
ရန်။ ။ တချို့ဘလောက်ကာ နာမည်တွေက http://www.myanmar-music.com/myanmarmusic/blogs.aspx မှာ မပါသေးတာ တွေအများကြီး ရှိတယ်
စိုး။ ။ ဟုတ်လား ဘယ်သူတွေများလဲ မပါတဲ့ လူတွေကို ကိုရန်အောင်သိလို့လား
ရန်။ ။ သိတာပေါ့ ဥပမာ ကိုနေဘုန်းလတ် ဆိုသူ့နာမည်မပါဘူး
စိုး။ ။ ဟာ . . အဲလိုသိရင် စောစောစီး လာပြောလေဗျာ ။ ထပ်ထည့်ပေးလို့ရတာပေါ့
ရန်။ ။ ဒါဆိုဟုတ်ပါပြီ ဗျာ။ ဥပမာ ကျွန်တော့ဘလော့ကို တာဝန်ယူထားက ကိုစိုးဇေယျနော် ။ ကျွန်တော် ဆီမှာ ဘယ်လိုပုံ စံမျိုးနဲ့လာ ယူမှာလဲ
စိုး။ ။ ကျွန်တော်က ကိုရန်အောင်ကို နိုက်တော့ မယ်ဆိုရင် ကြိုတင် အကြောင်းကြားမယ်။ ဟေ့လူ ခင်ဗျားကို ကျွန်တော်နိုက်တော့မှာ နော် ခင်ဗျား ကြိုက်တာ ကိုပေးမလား ကျွန်တော်နိုက်တာ ခံမလား ဆိုပြီး စပြောမယ်။
ရန်။ ။ ဟေ့ ကောင် လူကို ဘယ်လို အတန်းစာမှတ် နေလဲ စကားပြော တာကြည့်ပြော။ ဒီက နင်နိုက်ချင် တိုင်းနိုက်လို့ ရအောင် လမ်းဘေးက ဂလေကချေ မဟုတ်ဘူး။ ယူအက်က မာမီရန်တဲ့ ပါးကွဲသွားမယ် ဘာမှတ်လဲ။
စိုး။ ။ ကိုရန်အောင် သတိထား ဦးလေ။ ဘယ်လို ဖြစ်လို့ မာမီရန် ဖြစ်သွားရတာလဲ။
ရန်။ ။ ခီးမှ အညာသား စကားကို ရှင်းအောင်ပြော နိုက်မယ် ဆိုလို့ ကြက်သိန်း ထသွားတာ။
စိုး။ ။ ကိုရန်အောင်က လဲဗျာ တလွဲ မတွေးပါနဲ့ဗျာ စာမူတွေ ၀င်မွေပြီးရှာတာလို့ ပြောတာပါ။
ရန်။ ။ အေးနိုက်တယ် ပဲထားလိုက်ပါတော့။ ခင်ဗျား ကျွန်တော့ကို လာနိုက်မယ် ဆိုလို့ ကျွန်တော်က ကြောက်လန့်ပြီး သုံးပုတ် ထုတ်ပေးလိုက်ရင် ခင်ဗျာ မနိုက်တော့ဘူး မဟုတ်လား။
စိုး။ ။ ဒါကတော့ ပြောလို့မရဘူးဗျ ။ ခင်ဗျားရဲ့ ပေးကွက်လှရင် ကြေနပ်မှာပေါ့။ ဒါမှ မဟုတ် ကျွန်တော့မျက် စိထဲမှာ ဒီထက်ကောင်း တာတွေ ကိုရန်အောင်ဆီမှာ ကျန်သေးတယ်လို့ ထင်ရင် ဆက်နိုက်ပြီးယူမှာ။
ရန်။ ။ အောင်မှာ တောသားက လူပါးဝလို့။ ရွာထိပ်က နတ်စင်ပါ ထည့်ပေါင်းမှ တရွာလုံး ၁၆ အိမ် မပြည့်တဲ့နေရမှာ မွေးလို့သာ တော်တော့တယ်။ စကား ပြောရင်သူများကို အသား ယူသွားလိုက်တာ လွန်တယ်။
စိုး။ ။ ကိုရန်အောင် နဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ကြားမှာ စိတ်မဆိုးကြေးလေ။
ရန်။ ။ အေးထားလိုက်ပါတော့။ နင်တာ ၀န်ယူပြီး ငါ့ကိုနိုက်နေရင် တခြားသူ လာနိုက်လို့ မရတော့ဘူး ပေါ့။
စိုး။ ။ ဥပမာ ဗျာ။ ကျွန်တော်က ကဗျာကို အားမသန်ဘူး။ ဒီတော့ ကိုရန်အောင်ဆီမှာ ကဗျာ ကောင်းတွေ ရှိပေမယ့် နိုက်မသွားဘူ့း ဆိုရင် ဘေးက မြင်တဲ့လူက ၀င်နိုက်လို့ရပါတယ်။
ရန်။ ။ အေးထားလိုက်ပါတော့။ ဘလော့ကာ တစ်ယောက်ယောက်က အဲလို တာဝန်ခံ ပြီးမနိုက်ချင်ဘူး ဒါပေမယ့် သူက စာမူတွေ နိုက်တဲ့ နေရမှာလဲ ကူညီချင်တယ် ဘယ်လို လုပ်မလဲ။
စိုး။ ။ ရတာပေါ့ဗျ ဘာခက်တာမှတ်လို့ ဘာခက်တာမှတ်လို့ ။ ကိုယ့်အစိ စဉ်နဲ့ ကိုဖာသာကို တွေ့ရာမှာ လိုက်နိုက် ကြိုက်တဲ့ လင့်တွေ့ရင် mmblogbook@gmail.com ကိုမေးပို့လိုက်ရုံပဲ။ အခုဆိုရင် အလို လိုက်နိုက်ချင်လို့ ဆိုပြီး EMS တောင်လာ စာရင်းပေးသွားပြီ။
ရန်။ ။ ဒါဆိုရင် အပြင်ကနေ ဖရီး နိုက်တွေ လူတွေ ကြတော့ကော ဘယ် Rule တွေနဲ့ နိုက်ရမှာလဲ ။
စိုး။ ။ တာဝန်ပေးလို့ ပဲနိုက်နိုက် ။ ကိုဘာသာ ကိုနိုက်ချင်လို့ပဲ နိုက်နိုက်။ ကိုနိုက်တဲ့ လူဆီမှာ ခွင့်တောင်းပြီး ခွင့်ပြုမှ နိုက်ပါယူပါ။ မဟုတ်ရင် တရားစွဲ ခံနေရမယ်။ မူပိုင်ခွင့် နဲ့ပြောတာနော် တလွဲ မတွေးနဲ့ နော်
ရန်။ ။ ခွင့်ပြုအောင် စောင့်နေရင် ကြာနေမှာ ပေါ့။ ကျွန်တော်က စိတ်မရှည်းဘူး အရင် နိုက်မယ်။ နိုက်သွားပြီးမှ နိုက်သွားတဲ့ အကြောင်း Message ပေးမယ်။ သူခွင့်ပြုရင် သုံးတာပေါ့။ နိုက်သွားတာကို ခွင့်မပြု ဘူးဆိုလဲ ပြန်ဖြုတ်လိုက်ရုံပဲ။
စိုး။ ။ အင်းကောင်းတာ ပဲ ကြိုက်သလိုလုပ်။ အဓိက က ကာယခံ ရှင်လိုလိုလားလား ခွင့်ပြုဖို့ပဲ။
ရန်။ ။ နိုက်တဲ့ ကိစ္စကတော့ရှင်းပါပြီ
စိုး။ ။ မရှင်းတာရှိသေးရင်လဲ မေးပို့ ပြီးမေးလို့ရပါသေးတယ်။ ကျွန်တော့မေးက brvboy@gmail.com ပါ။
ကိုရန်အောင်ရေ ခွင့်ပြုချက် အတောင်းပဲ နိုက်လိုက်မိလို့ ဆောရီးဆောရီး နာမည်ကို အလွဲသုံးစား လုပ်မိလို့ တောင်းပန်ပါတယ်။ ခွင့်လွတ်တယ် မှတ်လား
ရန်။ ။ သေချင်းဆိုးကြီး
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 9:52 PM3ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
နေကအတော် လေးမြင့်နေပြီ။ မြင့်ဆို ၁၀ ရာရီ ကျော်လာပြီကိုး။ ကျွန်တော်စက် ဘီးစီးနေရတာလဲ မောလာပြီ ဒါကြောင့် စက်ဘီးကို ငှားတဲ့ ဆီမှာ ပြန်အပ်လိုက်ပြီး ဧည့်ကြိုကို အခန်းရပြီးလားလို့ စုံစမ်းကြည့်တယ်။ အခမ်းက မရသေးဘူး။ အခမ်းရနေ အောင်စောင့် နေရင်တော့ ပင်လယ်ထဲ ဆင်းဖို့ အချိန်ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ၁၀ နာကျော်တာ တောင်နေက တော်တော်လေး ပြင်းနေပြီ။ ဒါကြောင့် ပင်လယ်ထဲကို ဒီတိုင်းပဲ ဆင်းခဲ့တယ်။ ပင်လယ်ထဲ ရောက်တော့ ကဲကဲသဲသဲ အော်ဟစ်ပြီး ဆော့နေတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို တွေ့ရတယ်။ ခဏလောက်နေတော့ ရေနစ်လို့ရေနစ် လို့ ဆိုပြီး ၀ိုင်းကယ်နေကြ တာကို တွေ့လိုက်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်လဲ စပ်စပ်စုစုနဲ့ သွားကြည့်လိုက်တယ်။
သူများတွေ လားလို့ အောင်းမိပါတယ် ကျွန်တော် အုပ်စုက ကောာင်မလေးတွေ။ ပြီးတော့ ရေနစ်တယ် ဆိုတဲ့ ကောာင်မလေးက ပြောလိုက်သေးတယ်။ သြော် ဘဲချောချော လေးတွေ့လို့ ဇာတ်လမ်းရလိုရ ငြား ရေနှစ်ချင်ယောင် ဆောင်လိုက်တာ လာကယ်တာက ကိုယ့်အုပ်စု ကလူတွေ ဖြစ်နေတော့ ငါပဲ ဆပ်ဆလူးစိန် ဖြစ်သွားတော့တယ်တဲ့။ အင်း သူပြောပုံအရ ဆိုရင်တော့ ရေနစ်တဲ့ သူမှာ အပြစ်မရှိဘူး ကယ်မိသူတွေရဲ့ အမှားတာ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
အဲလိုရေကစား နေတုန်း ကမ်းခြေမှာ ဈေးလာရောင်းတဲ့ ဈေးသည်တွေကိုလဲ တွေ့ရပါတယ်။ သူ့တို့ကတော့ ငါးကင် ပုစွန်ကင် ရောင်းတဲ့ ဈေးသည်တွေပါ။ သူတို့ တွေကတော့ ထုံစံအတိုင်း ပုစွန်ကင် တစ်ကင်ကို ၁၀၀ လို့ပြောရောင်း ပါတယ်။ ဆစ်ရင်တော့ ငါးဆယ်နဲ့ ပေးပါတယ်။ ငါးကင်ကတော့ အရွယ်အကြီး အသေးပေါ် မူတည်ပြီး ၃၀၀ ကနေ ငါးရာ လောက်ထိ ရောင်းကြပါတယ်။ ရန်ကုန် ဘီယာဆိုင် တွေမှာ ၈၀၀ လောက်ရောင်းတဲ့ အကောင်ကို သူတို့ရောင်းတာ ၄၀၀ လောက်ပဲရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တလားဗီးယားနဲ့ ပင်လယ်ငါး အမျိုးစာချင်းတော့ မတူသလို ကင်တဲ့ပုံချင်းလဲ မတူဘူးပေါ့။ လာရောင်းတဲ့ ငါးကင် ပုစွန်ကင်တွေက စောစောက ဟိုတယ်ဝန်ထမ်း ပြောသလို တချို့ ဟာတွေက မကျက်တကျက် ဖြစ်သလို ကင်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ထုံးစံတစ်ခုက ပိုက်ဆံမပါလဲ ရောင်းပါတယ်။ ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ ဘောကွင်း ငှားခြင်း အုန်းရည်သောက် ခြင်း ငါးကင်ပုစွန်ကင်စား ခြင်းအားလုံး ပိုက်ဆံမပါပဲ ငှားလို့ စားလို့ရပါတယ်။ ပြီးမှ သူတို့က တည်းတဲ့ဟိုတယ် အခန်းကို လိုက်ပြီး ပိုက်ဆံယူကြတပါ။ စီးပြီးသား ဘောကွင်းကိုလဲ ပြန်အပ် စရာမလိုပါဘူး ကမ်းခြေမှာ ပစ်ထားခဲ့လဲ သူတို့တံဆိပ်နဲ့ သူတို့လိုက်သိမ်း ကြပါတယ်။ အဲဒီမှာ ပြသနာက ဘာရှိသလဲဆိုတော့ ဒီအဖွဲ့က ဘောကွင်း သုံးကွင်းငှားတယ် ဆိုရင် တခါတရံမှာ လေးကွင်းငှားတယ် ငါးကွင်းငှားတယ် ဆိုတာမျိုးတွေ လုံးဝမငှားပေမယ့် အခန်းကို ပိုက်ဆံလာတောင်း တမျိုးတွေ ကြုံရပါတယ်။ ဒါကသူတို့ကအကြံ ဖန်လုပ်ပြီး လာတောင်းတာ ဖြစ်နိုင်သလို အကျင့်မကောင်းတဲ့ လူတွေက အခန်းနံပါတ် လိမ်ပြောပြီး ငှားတာမျိုးလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဲလို ဘောကွင်းငှားတာ တို့စက်ဘီးငှားတို့က သာမန်အားဖြင့် ကြည့်ရင် ဘာမှမဟုတ်လောက် ဘူးထင်ပေမယ့် ၀င်ငွေက မဆိုးဘူးဗျ။ ၀င်ငွေ မဆိုးသလို ပေးရတဲ့ အခွန်ကမနည်းဘူး။ ဘောကွင်း ငှားခြင်းလုပ် ငန်းဆိုရင် တစ်နှစ်ကို ငါးသိန်းပေးရတယ် လို့သိရတယ်။ ငါးသိန်းဆိုတာက အကွက် တစ်ကွက်ကို ပြောတာပါ။ အကွက်တစ်ကွက်ကို မီတာ တစ်ရာလောက်တော့ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ကိုရထားတဲ့ အကွက်တွင်းမှာ ဘောကွင်းငှား ခြင်းလုပ်ငန်းကို သူများလာလုပ်လို့ မရသလို သူများအကွက်မှာ လဲကိုသွားလုပ်လို့မရပါဘူး။ ဘောကွင်း တစ်ကွင်းကို တစ်ထောင်လောက် ပေးဝယ်ရပါတယ်တဲ့ ။ တစ်ကွင်းကို တစ်ခါငှားရင် သုံးရာ ယူပါတယ်။ တစ်ရက်ကို အနည်းဆုံး ခြောက်ထောင်ကနေ နှစ်သောင်း ကျော်လောက်ထိ ပြန်ဝင်ပါတယ်တဲ့။
စက်ဘီငှားတာလဲ အဲလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် စက်ဘီးက ကမ်းခြေစီနှင်းခွင့် လိုင်စင်ဝင်ရပါသေးတယ်။ စက်ဘီတစ်စီးကို လိုင်စင်ဝင်ရင် သုံးသောင်းကျပ် ပေးရပြီး နှစ်စဉ်ကြေးကတော့ ခုနှစ်ထောင်ကျပ် ဆောင်ရပါတယ်တဲ့။ စက်ဘီးတစ်စီးရဲ့ တန်ဖိုးကတော့ တစ်စီးကို ခုသောင်းသောင်းကနေ တစ်သိန်းခွဲလောက်ထိ တန်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ၀င်ငွေကတော့ စက်ဘီးအရေတွက် များရင်များသလို ကွာခြားကြပါတယ်။ စက်ဘီကတော့ တစ်ယောက်နင်း တစ်ဘီးကို တစ်နာရီ ငါးရာ၊ နှစ်ယောက်နင်း ဘီးကို တစ်ထောင်ယူပါတယ်။
ကျွန်တော်ရေထဲက တက်တော့ မနက်၁၁နာရီ ကျော်နေပါပြီ။ ဟိုတယ်ကို ပြန်ရောက်တော့ ကျွန်တော်တို့ နေမဲ့ အခန်းက မရသေးပါဘူးတဲ့။ ပထမ ဧည့်သည်ကလဲ ကြည့်ရတာ ၁၂ နာရီအထိ တန်အောင်နေမလို့ လားမသိပါဘူး။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်လဲ အခန်းရပြီးသား လူတွေရဲ့ အဆေင်မှာ ရေချိုးပါတယ်။ ရေချိုးပြီးတော့ အ၀တ်စားလှဲမလို့ ကြည့်လိုက်တော့....။
သေပါပြီ။ ထုံးစံအတိုင်း ဖြစ်လာရင် အရာရာနဲ့ အကြောင်းကြောင်း။ ပါလာတဲ့ အ၀တ်က နှစ်စုံထဲ ပိုဆိုးတာက မလျှော်ရသေးတဲ့ အ၀တ်တွေ။ ဆရာ လုပ်ချင်တဲ့ အကြိုးဆက်ခံ ဦးပေါ့။ ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ။ ကျွန်တော်က အ၀တ်တွေကို ကိုယ်တိုင် မထည့်ပဲ။ ကျွန်တော့တို့ထဲက လူနိုင်တစ်ယောက် ကို ငါ့သေတ္တာထောင့်မှာ ပုံထားတဲ့ အ၀တ်တွေ ထည့်လိုက်ဆိုပြီး ပြောလိုက်မိပါတယ်။ တကယ်ပဲ မှားတာလား တမင် ပညာပြတာ လားတေ့ာ့ မသိဘူးဗျာ။ သေတ္တာထောင့်ပါဆို အခန်းထေင့်မှာ လျှော်မလို့ပုံထားတဲ့ အ၀တ်တွေ ကောက်ထည့်လာတယ်။ သြော် တော်တော်ကံ ဆိုးတဲ့ငါပေပဲ။ ချောင်းသာရယ် ငါရယ် မလျှော်ရသေးတဲ့ အ၀တ်တွေရယ်တော့ တွေ့ကြပြီပေါ့လေ။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 2:19 AM 1 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရည်ညွှန်း: ခရီးသွား, ချောင်းသာ, ဆေင်းပါး
လေးဖြူ၏ သီချင်း မဟုတ်ပါ။ နေရောင် မဟုတ်ပါ။ လရောင် ကြယ်ရောင် မဟုတ်ပါ။ လျှပ်စစ်မီးအရောင် မဟုတ်သလို ဖရောင်းတိုင် အပါအ၀င် အခြားအခြား သောမီးများ၏ အရောင် များမဟုတ်ကြပါ။
အလင်းရောင်သည် အမြင်အာရုံ တွေကိုေ၀၀ါးသွား လေက်အောင် စူးရှ ပြင်းထန်း ခြင်းမရှိပါ။ သာမန် မိန်ဖျော့ဖျော့ အလင်းလေး တစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။ အလင်းရောင်သည် မဲမှောင်သော ကျွန်တော့်၏ ဘ၀ကို အဖော်ပြုပေးပါ၏။ သို့သော် ကျွန်တော်၏ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ မဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင် ကျွန်တော်နင်း လျှေက်သော ခြေလှမ်းများ မချမှီ ဆူးဖြစ်သည် ချိုင့်ဖြစ်သည် ချေက်ဖြစ်သည် ပြန့်ဖြူးသည် ဆိုသည်ကိုတော့ ကောင်းစွာ ပြောပြ ပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်။
အမှောင် ထဲတွင် ကြာရှည်စွာ စမ်းတ၀ါးဝါး ဖြစ်နေသော ကျွန်တော်အတွက် အလင်းရောင်သည် အဖော်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အလင်းရောင် ပြောသော အကြောင်းပြချက် များကို ယုံကြည်ခဲ့သည်။ ထို့အတူ အလင်းရောင် ပေါ်တွင် ခင်မင် တွယ်တာ ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အလင်းရောင်သည် ကျွန်တော့ ဘ၀ထဲတွင် ထာဝရ ထွန်းလင်းမည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့ပါ၏။
သို့ရာတွင် မိန်ဖျော့ဖျော့ အလင်းရောင်နှင့် ကျွန်တော့ ကြားတွင် အမှောင်ထု တစ်ခု ၀င်ရောက်ခဲ့ ပါသည်။ အမှောင်ထုကြောင့် အလင်းရောင်နှင့် ကျွန်တော့ကြားမှာ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး အမြင်တွေ ဝေး၀ါး သွားပါသည်။ ကျွန်တော်သည် အလင်းရောင်နှင့် အတူ ရှိနေရ သည်ကို နှစ်သက်ပါ၏။ ထို့အတူ အလင်းရောင်လဲ ကျွန်တော့ကို ခင်မင်တွယ်တာသည် ယုံကြည်မိပါသည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ကြားက အမှောင်ထုကို ဖြိုခွင်းပေး နိုင်မည့်သူမရှိပါ။
ဒီလိုသာ ဆိုရင် ကျွန်တော်နှင့် အလင်းရောင် တဖြည်းတဖြည်းချင်းေ၀၀ါးပျောက်ကွယ် သွားကြတော့မည်။ အလင်းရောင် သည်ကျွန်တော့ ဘ၀အတွက် ထာဝရ မထွန်းလင်း နိုင်တော့ဘူးလား .................
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 12:31 AM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန် ဘလောဂ်ကာများနှင့် ပြည်ပမ ခေတ္တရောက်ရှိနေသော
ဘလောဂ်ကာများ တွေ့ဆုံ၍ စာအုပ်ထုတ် ဝေရေးကိစ္စ အတွက် ညှိနိုင်းဆွေးနွေးရန်
ရှိပါသောကြောင့်။ ၁၈ ၊၄၊ ၂၀၀၇ ( နှစ်ဆန်း ၂ ရက်နေ့ ) နေ့လယ် ၁၂
နာရီတိတိမှာ ဗိုလ်အော်ကျော်လမ်း အာလာဒင် မျက်စောင်း ထိုးရှိ Coffe King
သို့ မပျက်မကွက် ကြွရောက်ပေး ကြပါရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 5:05 PM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ဖြစ်နိုင်ရင် ထမင်းကို မစားချင်ဘူး ။ ဘာမှလုပ် ချင်စိတ်လဲ မရှိဘူး။ သွားဖို့လား ဝေလာဝေး ထိုင်နေတဲ့ နေရာကကို မထချင်တာ။ ထိုင်နေရတာလား ပျင်းတာပဲ။ ဖြစ်နိုင်ရင် မထိုင်ချင်ဘူး။ အိပ်ဖို့ကျတော့လဲ တုံးလုံးလှဲချ လိုက်ရမှာကို ပျင်းနေတာ။ အပြင်မှာ ဘာတွေ ဖြစ်နေလဲ မသိချင်ဘူး။ အပြင်မှာ ဖြစ်တာမ ပြောနဲ့ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ဘာတွေ ဖြစ်နေလဲ ဆိုတာကိုကို မသိချင်ဘူး။
သူများတွေ ပြောတယ် စိတ်ညစ်ရင် စိတ်လေရင် အရက်သောက် ဘီယာသောက်တဲ့။ ငါကတော့ စိတ်လေရင် ဘီယာသောက်ဖို့ မပြောနဲ့ ဘီယာဆိုင် သွားရမှာကို ပျင်းတာ။ ဖြစ်နိုင်ရင် အဲဒီအချိန်မှာ ငါဘာကို မှမသိချင်ဘူး။
Inbox ကိုကလစ်ခဏ ခဏ သွားလုပ်နေတယ်။ မျှော်နေသူ တစ်ယောက်ပို့ ထားတဲ့ MSG ရောက်နေမလာား။ သူမပို့ပါဘူး အိပ်နေလောက်ပီ ငါသိတယ်။ ဦးနှေက်က စဉ်းစားဥာဏ်ရှိတော့ သူမပို့တော့ဘူး ဆိုတာသိပေမယ့် လက်မှာက စဉ်းစားဥာဏ် မရှိဘူးလေ။
သူဆိုတာ ဘယ်သူလဲ ဘယ်ကလဲ လာမမေးနဲ့ ငါကိုယ်တိုင်ကို မသိဘူး။ ငါသိတာတစ်ခုက သူဆိုတာ ငါမဟုတ်ဘူး။ အဲဒါသေချာတယ် ။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 8:37 PM2ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရည်ညွှန်း: ကိုယ်ရေးကိုတာ, စိတ်လေခြင်း
မြန်မာတွေမှာ ပွဲလမ်းသဘင်ပေါများလှသည်။ ဆယ့်နှစ်လရာသီ ရှိရာတွင် ပွဲလမ်းများလဲ ၁၂ ခုတောင်ရှိလေသည်။ ယင်းအထဲမှ သီတင်းကျွတ် နှင့် သင်္ကြန်မှာ ထင်ရှားသည်။
ယုခုအခါ မြန်မာတွေ မှာ ၁၂ ပွဲမကတော့ပါ။ စုစုပေါင်း ၁၅ ပွဲလောက်ရှိမည် ထင်မိသည်။ မြန်မာလူမျိုး များသည် တော်တော် အသုံဝင်ပုံရသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ခရစ်စမတ်ပွဲ တော်တွင်လဲ ပါရသည်။ ခရစ်နှစ်သစ်ကူးရင်လဲ Happy New Year လုပ်လိုက် ကြသေးသည်။ ရန်ကုန်မြို့ တရုပ်နှစ်သစ်ကူးမှာ ခြင်္သ့က တွေနဲ့ တုံချန်ချန် အသံကြားလို့ ထွက်ကြည့်လိုက်ရင် မြန်မာတွေဖြစ်သည်။ ဒါတောင် တချို့က အစ်ပွဲတို့ ဒေ၀ါပါလီပွဲ တို့ဝင်နွဲလိုက်သေးသည်။
မြန်မာတွေသည် ခရစ်နှစ်သစ်ကူးကို မြန်မာနှစ်သစ် ကူးထက်ပိုပြီး နှစ်သစ်တစ်ခု အဖြစ်သတ် မှတ်ချင်ပုံရသည်။ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်ည ၁၂ နာရီဆိုတာ နဲ့ တမြို့လုံး ဆူနေအောင် နေရာအနံ့ကနေ Happy New Year Happy New Year Happy New Year နှင့် ကမ္ဘာပျက်မတတ် အော်ကြသည်။ မြန်မာနှစ်ဆန်း တရက်နေ့ အာရုဏ်တက်မှာတော့ မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်ပါလို့ ထအော်တဲ့လူ တစ်ခါမှ မတွေ့ဘူး။
အောင်မှာ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် လျှေက်ပြောလို့ မင်းကော ဘယ်နှစ်ခါ အော်ဘူးလို့လဲ
ကျွန်တော့လား အတူတူပဲလေ တစ်ခါမှ မအော်ဘူးဘူး
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 5:03 AM 1 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရည်ညွှန်း: သရော်, အတွေးအမြင်
ကမ္ဘာမြေသည် လူသာများ အပေါ် ချစ်ခြင်းလဲမှရှိ မုန်းချင်းလဲ မရှိ သလို မြတ်နိုးခြင်းလဲမရှိပါ။ ဖာသိဖာသာ နေလေ့ရှိသည်။ ကမ္ဘာမြေသည် လူသားတို့ အပေါ်ကို ဆုံးမခြင်း ဆုချခြင်း ဒါဏ်ခတ်ခြင်း အလျှင်းမရှိပါ။
ကမ္ဘာမြေသည် ရွှေဥဥပေးတဲ့ ငန်းတစ်ကောင်နဲ့ တူပါ၏။ သူ့ကိုဒါဏ်ရာတွေ ရအောင်လုပ်ထားရင်တော့ ဥဥပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ကောင်းကောင်း ပြုစုလျှင်လူသား တို့အတွက် ဥများစွာကို ဥပေးပါသည်။ တခါတည်း အပြီးသတ်စား ချင်ရင်လဲရပါသည်။ သို့သော် နောက်ထပ် ရွှေဥပေးနိုင်တော့ မည်မဟုတ်ပါ။
လူသားတို့သည် ကမ္ဘာမြေပေါ်ကို ဖက်တွယ်ကြ၏။ ကမ္ဘာကြီးပေါတွင် အသက်ရှင် နေထိုင်ကြသည်။ သေဆုံးသွားကြသည်။
ကမ္ဘမြေကြီးသည် လူသားတို့ကို ဂရုမစိုက်ပါ။ သို့ရာတွင် ကမ္ဘာမြေကြီးသည် သူထံတွင် ခေတ္တတည်းခိုရန် လာရောက်သူများကို မေးခွန်း သုံးခုမေးလေ့ရှိသည်။
ပထမမေးခွန်း အတွက် အဖြေကို ရွေးချယ်ခွင့်မရှိကြပါ။
ဒုတိယမေးခွန်း၏ ဖြေကို လူသားတို့ မသိကြပါ။
တတိယ မေးခွန်း၏ အဖြေကိုကား လူသားတို့ စိတ်တိုင်ကျ ရွှေးချယ် ဖြေဆိုခွင့်ရှိပါသည်
မေးခွန်းနံပါတ်သုံး ဘာအတွက် လာတာလဲ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 2:01 AM 1 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရည်ညွှန်း: ဒသန, အတွေးအမြင်
ငါငိုလို့သာ မျက်ရည်ကျရင် ကမ္ဘာမြေဟာ စင်္ကြာဝလာ အောက်မှာ ရေနှစ်သွားလိမ့်မယ်
ငါအော်လို့သာ အသံထွက်ရင် သိကြားမင်း ထွက်ပြေးသွား လိမ့်မယ်
ငါခြစ်လို့သာ အရာထင်ရင် ပင်လယ်ပြင်မှာ အရူးတစ်ယောက်ရဲ့ နာမည်ကိုရေးထား ချင်တယ်
ငါတီးလို့သာ အသံထွက်ရင် ကမ္ဘာမြေကို မိုးကြိုးဆိုတာ ပစ်ဖို့ မလိုအပ်တော့ဘူး
ငါပြေးလို့သာနေရာရွှေ့ရင် လူသားတွေ ဒုံးပြန်ကို မြန်သည်ထက် မြန်အောင် ကြိုးစာဖို့ မလိုတော့ဘူး
၀ိညာဉ် တစ်ကောင်စားတဲ့ ထမင်းက ဘယ်တော့မှ ၀မှာဟုတ်သလို သေဆုံး နေသူ တစ်ယောက် ရဲ့ ဘ၀ထဲကို ဘယ်အိမ်မက် မှ လာချင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး
ငါဟာ သေနေတဲ့ ၀ိညာဉ်တစ်ကောင်လေ ဘယ်လိုလုပ် ခြေရာကျန်မှာလဲ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 1:32 AM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရည်ညွှန်း: ဒသန, အာဟာရ
တရံတခါတွင် ဟန်ဆောင်လိမ် ညာလေ့ရှိသည်
ပြုံးထားသော လှပသည့် အရေပြား၏ နောက်ကွယ်တွင် လိမ်ညာမူများရှိသည်
သရဲတကောာင်၏ ခြောက်လှန့် မှု၏နောက်ကွယ်တွင် လိမ်ညာမူများရှိသည်
အိမ်မက်၏ နောက်ကွယ် တွင်လိမ်ညာမူများရှိသည်
ချစ်ခြင်း၏ နောက်ကွယ်တွင် လိမ်ညာမူများရှိသည်
မုန်းခြင်း၏ နောက်ကွယ်တွင် လိမ်ညာမူများရှိသည်
အရာခပ်သိမ်းသော အကြောင်းရာများ ၏နောက်ကွယ်တွင်လိမ်ညာမူများရှိသည်
မိတ်ဆွေ သင်ငါ့ကို လိမ်လိုက်ပါ
ဆိုတာကို မသိအောင်တော့ လိမ်ပေးပါ
ငါ့ မသေခင် သင်လိမ်တယ် ဆိုတာ မသိပါရစေနဲ့
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 1:01 AM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
တယ်လီဖုန်းက မြည်လာသည်။ သေချာပြီ စောစော ကမန္တလာသား ဆက်တာ ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်တော်က ချက်ထဲမှာ မိန်းကလေးလို့ သူ့ကို ပြောထားသည်။ ခက်သည်က အယောင်ဆောင် ကိုင်ခိုင်းလို့ ရအောင် အိမ်မှာ မိန်းကလေး တစ်ယောက်မျှမရှိ။ ဖုန်းကို သွားကိုင်ဖို့ ရာကျွန်တော် မ၀ံ့ရဲ။ နောက်ဆုံးတော့ ဘာဖြစ်ဖြစ် ဆိုပြီး စိတ်ပိုင်းကာ သွားကိုင်လိုက်သည်။
ဟုတ်ကဲ့ ခင်စပယ်လှိုင်နဲ့ ပြောချင်လို့ ပါ။
သေချာ သွားပြီ မန္တလာသား။ ဒီနေရာမှာ ထုံးစံ အတိုင်း ဥာဏ်နီ ဥာဏ်နက် သုံးမှ ရတော့မည်။ မဟုတ်ရင်မလွယ်
အေးပြော ငါခင်စပါယ်လှိုင်ရဲ့ အစ်ကိုပဲကွ။ ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ
ကျွန်တော်လေသံကို ခပ်မာမာပင် ပြောလိုက်သည်
ကျွန်တော်သူ့ သူငယ်ချင်းပါဗျ။ သူနဲ့ ပြောချင်လို့ ပါ
အောင်မလေး လေသံက ရိုသေနေလိုက်တာ သူ့ဖေနဲ့အမေ ပေါ်တောင် ဒီလောက်ရိုသေ ရဲ့လားမသိ။ ဒီနေရာမှာ တော်တော်လေး အပိုးကျိုးနေသည်။
အေးသူ အခန်းထဲမှာ စာကျက်နေတယ်။ ခေါ်ပေးလို့ မရဘူး ။ ပြောစရာရှိ ရင်ငါ့ကို မှာထားခဲ့
အော်ရပါတယ် ဗျ။ မမှာတော့ ပါဘူး။ မန္တလေးက အောင်ကျော်စိုး ဆက်တယ် လို့သာပြောပေးပါ။
ကျွန်တော်သူ့ကို ပြောပေးမယ်လို့ လဲမပြော။ မပြောပေး ဘူးလို့လဲ ပြန်မပြော။ သူ့စကားဆုံး သည်နှင့်ဖုန်းကို ချလိုက်သည်။ ပြီးတော့မှ ကျွန်တော် သက်ပြင်းချ နိုင်တော့သည်။
ကွန်ပျူတာရှေ့ ပြန်ရောက်တော့ ငနာကောင်က ချက်ထဲမှာ ပြန်ရောက်နေပြီ။ သူက စကား လာပြောသည်။ ဘာတဲ့ မမကို မောင်လေး ဖုန်းဆက်တယ် နော်တဲ့ မမရဲ့ အစ်ကိုက ခေါ်မလေးလို့တဲ့ ။ အေးဒါကြောင့် နင့်ကို ပြောသားပဲ မဆက်ပါနဲ့လို့ အခုတော့ ငါ့ကို ငါ့အစ်ကိုဆူတော့ မယ် လို့ပြောလိုက်တော့ ငနာကောင်က ကျွန်တော့ကို တောင်းပန်ရှာပါသည်။ ပြီတော့လဲ ပြောသေးသည် ။ သူ့အတွက်နဲ့ မမဒုက္ခရောက် တာကို မကြည့်ရက်တာတွေရော တောင်းပန်တာတွေရော စုံနေတာပါပဲ။ ကျွန်တော်က ဒီဘက်ကနေ သူ့အဖြစ်ကို ကြည့်ပြီး အူတက်မတတ် ဟားနေရသည်။ သြော် တော်တော် မလွယ်တဲ့ ကလေးတွေပဲ။
သူများကို အားရပါးရ အရှုးလုပ်ပြီးကာမှ တစ်ခု ပြန်စဉ်းစား မိသည်။ ပြသနာပဲ အခု ကျွန်တော်နဲ့ ချက်နေတဲ့ ကောင်မလေးတွေ ဆိုတာ တွေကရော ကျွန်တော့လို ကောင်မျိုးတွေ မဖြစ်နိုင်ဘူး လား။
အပိုင်း ၁ ကိုဖတ်ချင်ရင်
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 11:55 PM2ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရည်ညွှန်း: ၀တ္ထု, ဖြေရှင်းခွင့်
မဟာသင်္ကြန်နဲ့ ပတ်သက်လို့ စက်ရပ်သတင်း ကိုတင်ပြလိုပါတယ်။ စက်ရပ်သတင်း ဆိုတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သတင်းစာတွေ ခေတ်ကောင်းတဲ့ အချိန်တုန်းက ညပိုင်းမှာ သတင်းစာ ပုံနှိပ်စက်မှာ ရိုက်နေတုန်း သတင်းထူးလာလို့ အရေးတကြီး ထည့်ရမယ်ဆိုရင် ရိုက်လက်စ ပုံနှိပ်စက်ကို ရပ်လိုက်ပြီး အရေးကြီးသတင်းကို ထည့်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲလိုစက်ကို ရပ်ပြီးထည့်တဲ့ သတင်းကို စက်ရပ်သတင်းလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။
တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း UFL အရှေ့က ပုံပါ
နောက်ပိုင်းမှာတော့ စာပေစိစစ်ရေးရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ယူပြီးမှ ထည့်ရတာဆိုတော့ စက်ရပ်သတင်းဆိုတာ မရှိသလောက်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် စာပေစိစစ်ရေး တင်စရာမလိုတဲ့ ဘလော့မှာတော့ အရေးတကြီး သတင်းတွေကို ရေးလက်စ တွေပစ်ထားပြီး တင်လို့ရပါတယ် ဒါကြောင့်စက်ရပ်သတင်းလို့ နာမည်ပေး လိုက်ပါရစေ။
ကျွန်တော် ချောင်းသာက ပြန်လာပြီးကတည်းက ဘယ်မှမထွက်ပဲ အိမ်တွင်းအောင်းနေရာက ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ ဆိပ်ကမ်းသာ လမ်းထိပ်က ၃၈ လမ်းဈေးကို သွားခဲ့ပါတယ်။ ၀ယ်စရာဆိုင်တွေ ပိတ်တော့ ကိုယ်တိုင်ချက်စားလို့ ရအောင် ခရမ်းချဉ်သီးလေး ဆူပုတ်၇ွက်လေး ထွက်ဝယ်တယ် ဆိုပါတော့ဗျာ။
ထွက်လာတယ်ဆိုရင်ပဲ ရေပက်နေတဲ့ကလေးတွေ လောင်းမှာစိုးလို့ ဘေးကပ်ပြီး လျှေက်လာပါတယ် မိုးပေါ်ကရေတွေကျ လာပြီးတကိုယ်လုံး ရွှဲသွားတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ လို့ကြည့်လိုက်တော့ တိုက်သုံးလွာလောက်က ကလေးပေါက်စလေး တွေက ရေနဲ့လောင်းလိုက်တာဗျ။ အော်ကလေး ပေါက်စလေး တွေမို့တော်သေးတယ် ကောင်မလေးတွေ သာဆိုရင် အဲနားလေမှာ သုံးလေးခေါက်လောက် ခေါတုန့်ခေါက်ပြန် လျှေက်မိနေမလားပဲ။ အဲလိုနဲ့ ၃၈ လမ်းဈေးရောက်တဲ့အထိ မကြာခဏန ဆိုလို တိုက်ပေါ်ကနေ ရေပက်တာကို ခံရပါတယ်။ မြေပြင်ပေါ်မှာ ပက်တဲ့ရေက လျှောင်တိမ်းလို့ ရပေမယ့် တိုက်ပေါ်က ပက်တဲ့ရေကတော့ ဘယ်ကနေပက်မှန် မသိတော့ မြေအောက်မှာ မြုတ်ထားတဲ့ မိုင်းတလုံးလိုပဲ ဘယ်နားမှာရှိတယ် ဆိုတာ ကြိုမသိနိုင်ဘူး လောင်းခံလိုက်ရမှ အော်ဒီအပေါ်မှာ ရှိပါကလား လို့သိလိုက်ရတယ်ပေါ့ဗျာ ။
ပြည်လမ်း အင်းယားကန်ဘေးက ပုံပါ
အဖွင့်ကတော့ သိရိမင်္ဂလားဈေးက ကုန်စိမ်းသည်တွေနဲ့ စလိုက်ရအောင်ဗျာ။ ဒီမှာ ပြောချင်တာကတော့ အားလုံးက စကားသတင်းတွေပါ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရောက်ခဲ့ တာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။
ခရမ်းချဉ်သီး ၀ယ်နေတုန်းမှာ ထိုင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကြောပြင်ကို ရေတွေစိုလာတာ သတိထားမိလိုက်တယ်။ ရေက စိမ်ပြေနပြေ ဖြည်းဖြည်း ချင်းလေး လောင်းနေတာဗျ။ ရေမွေးနံ့လေးတွေက လဲသင်းနေတာပဲ။ အင်းလည့်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ မျက်လုံးချင်းဆုံရင် ရင်တွေ ခုန်ရော့မယ် ဆိုပြီးကျွန်တော်လည့် မကြည့်ပါဘူး။ ခရမ်းခဉ်သီးတွေပဲ ဆက်ရွေးနေပါတယ်။ ရေလောင်းနေတဲ့ ကောင်မလေး ထွက်သွားတော့ ဒီနှစ်သင်္ကြန်ကတော့ လူကြီးတွေကဲတဲ့ သင်္ကြန်ဖြစ် နေတယ် အဲလိုပဲမိန်းမကြီတွေကြီး ကဲနေတာ လို့ ခရမ်းချဉ်သီးသည်က ပြောတော့မှ စောစောက ကျွန်တော့ကို ရေလောင်းသွားတဲ့ ကောင်မလေးကို လမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ အားပါး အသက် လေးဆယ်လောက်ရှိတဲ့ မိန်းမ၀၀ကြီးဗျာ ဘောင်ဘီကျပ်ကျပ်ကို ၀တ်ပြီး လုပ်လီလုပ်လဲနဲ့ လက်တစ်လက်က ရေပုံးကိုဆွဲပြီး ထွက်သွားတာကို လှမ်းမြင်လိုက်ရပါတယ်။ အဲလိုပုံမျိုးကို ကိုရန်အောင်နဲ့ ကိုကျော်ဇေယျ တို့ကတော့ ကြိုက်ချင်လဲ ကြိုက်မှာပေါ့လေ ။
အဆိုပါခရမ်းချဉ်သီသည်ရဲ့ ဆက်လက်သတင်း ပေးပို့ချက်အရ သိရိမင်္ဂလာဈေးသည် ကုန်စိမ်းသည်များ လုံချီများ ချွတ်ကာ ဘောင်ဘီများ ၀တ်၍ အပြတ်ကဲနေကြကြောင်း မူးတဲ့ဈေးသည်တွေ လဲမူးနေကြောင်း။ အများစုမှာ သုံးဆယ်ဝိုဗာ အသက်ကြီးပိုင်းများ ဖြစ်ကြကြောင်း။ သင်္ကြန်တွင် ဖြစ်၍သိရိ မင်္ဂလာဈေးနဲ့ ၃၈ လမ်းကို ကားခအသွား အပြန် လေးရာ ပေးရကြောင်း ဆက်လက်သတင်းပေး ပို့ပါတယ်။
အနော်ရထာ လမ်းမကြီးမှာ မြင်နေရတဲ့ အနေထားကတော့ ရေပက်ကားတွေ ပြည့်ကြပ်နေပါတယ်။ ရန်ကုန်ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ရေပက်ခံ ထွက်သူနဲ့ ရေပက်ခံမဏ္ဌပ် ဒီမန်းနဲ့ဆပ်ပလိုင်း မမျှတဲ့အတွက် ကားတွေပုံ နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရတာကလဲ အကြောင်းရှိပါတယ်။ မဏ္ဌပ်တစ်ခုရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်က အနည်းဆုံးသိန်းခြောက်ဆယ် လောက်ကနေ သိန်းရာချီပြီး ကုန်ကျပါတယ်။ မဏ္ဌပ်တစ်ခု ဆောက်ခွင့်ပါ မစ်ရဖို့ကလဲ မလွယ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ရေပက်မဲ့လက်မှတ် တွေကလဲ တရက်ပက်ရင် အနည်းဆုံး တစ်သောင်းခွဲကနေ ရေမီးအငြိမ်းဆိုရင် နှစ်သောင်းခွဲ လောက်ထိရှိ တတ်ပါတယ်။ ကားနဲ့လယ်ရင် သူငယ်ချင်း ဆယ်ယောက်လောက် စုမိရင် တစ်ယောက်ကို ငါးထောင်စီလောက် စပ်ထည့်လိုက်တာနဲ့ ကားတစ်စီးငှားလို့ ရတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေပက်ခံသူနဲ့ ရေပက်သူ အရေအတွက်က အဆမတန် ကွာခြားနေရခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အင်္ကျီအ၀ါလေးကို အပေါ်က လက်ရှည်အမည်းနဲ့ ရေကစားနေတဲ့ အလယ်က ကောင်မလေးက မယ်လိုဒီပါ
မကြီးမငယ်နဲ့ အသက်လေးဆယ်ကျော်မှ ဘောင်းဘီတိုလေး ၀တ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့တခွင် ပြဲပြဲစင်အောင် လျှောက်သွားပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်လာတဲ့ အမည်မဖော်လို တစ်ဦး၏ သတင်းပေး ပို့ချက်အရ အင်းယားလမ်းသည် ထုံးစံအတိုင်းပင် စည်ကားလျှက်ရှိ နေကြောင်း ။ ရာဇာနေ၀င်း မန္တလေးသွား နေတာကြောင့် ရာဇာမဏ္ဌပ် ကိုနှစ်စဉ်လုပ်ပေး နေကြ မေတ္တဦး မျက်စိအထူးက ဆေးခန်းက ဒီနှစ်မှာတော့ ဟေမာနေ၀င်း မဏ္ဌပ် ဆိုပြီး တက္ကသိုလ် ရိပ်သာလမ်း မှာ လုပ်ထားပြန်ပါတယ်တဲ့။ သူရဲ့ သတင်းဆက် လက်ပေးပို့ ချက်အရ ကန်တော်ကြီး ယခင်ငါးပြတိုက်နေရာက အိုင်းယွန်းခရော့ ဖျော်ဖြေရေး စင်မှာတော့ လူတွေတိုးလို့ မပေါက် အောင်ရှိနေပြန်ပါတယ်တဲ့။ သိမ်ဖြူလမ်းမှာတော့ ရခိုင်ရိုးယာရေသပင် ပွဲတော်ကို ယခင်နှစ်များက အတိုင်ပင် ကျင်းပလျှက်ရှိနေပြန်တယ် လို့ပြောပါတယ်။
လည်းတန်းမှ ဂျပိုးတစ်ယောက် ဖုန်းဆက်ပြီး သတင်းပေးပို့ ချက်အရ ။ ဒီနှစ်ကတော့ကွာ မိုက်တယ်ဗျို့ ခါတိုင်းလိုနေက လဲမပူဘူး။ မိုးလေးအုံ့နေတာ့ ရှက်ကီလဲ ဖြဲချင်သလောက်ဖြဲ လူကိုသိပ်မထိဘူး။ မနက်ကဆိုရင် မိုးပြေးလေးတောင်ရွာလို့နေသေးတယ်။ ရေပက်ခံ ထွက်တဲ့ကားတွေကလဲ ဘာပေါသလဲမမေးနဲ့ အကျနဲ့အကြတ်ပဲရှိသေးတယ် အတက်နေ့ဆိုရင် ပိုကျပ်လိမ့်မယ်ကွ။ ရယ်လို့ သတင်းပေးပို့ခဲ့ပြန်ပါတယ်။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 7:24 PM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရည်ညွှန်း: သတင်း, သင်္ကြန်
ဒီတစ်ခေါက်သွားရတဲ့ ချောင်းသာ ခရီးကတော့ အပန်းပြေမဟုတ်ပဲ အပန်းယူခရီးလို့ ပြောရင်မှန်မလား မသိဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ စထွက်ကတည်းက အစစအရာရာ ကမောက်ကမတွေ ဖြစ်နေလို့ပေါ့။ ငှားထားတဲ့ကားကို ကိုးနာရီးချိန်းထားတာ ရောက်လာတေ့ ည ၁၂ နာရီ။ ပုသိမ် အ၀င်မှာက ပျက်လိုက်သေးတယ်။ ပုသိမ်ရောက်တော့ မိုးလင်းနေပြီ။ ကျွန်တော်တို့ လူစုကို လက္ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ချထားခဲ့ပြီး ကားသွားပြင်ဦး မယ်ဆိုပြီး ထွက်သွားပါ လေရော။
မြန်မာပြည်က ဘယ်လက္ဘရည်ဆိုပဲဖြစ်ဖြစ် ထမင်းဆိုင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကားသမားတွေကို အလကား ကျွေးလေ့ရှိကြတယ် အဲဒါမှလဲ သူတို့ဆိုင်မှာ ကားရပ်မှာကို။ ကားရပ်မှလဲ ကားပေါ်မှာပါတဲ့ လူတွေက သူတို့ဆိုင်မှာ စားကြသောက်ကြမှာ။ ကားထွက်သွားတော့ ကျွန်တော်အကြံ တစ်ခုရတယ် ကားသမားတွေ ကားသွားပြင်နေတုန်း ကားသမား အယောင်ဆောင်ပြီး ဖရီးကြိတ်ရင် ရနိုင်တယ်ပေါ့။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အုပ်စု လူ၄၀ ထဲမှာ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ကားသမားလို ပုံစံပေါက်တဲ့ လူသုံးယောက် လောက်ကို ကျွန်တော်လိုက်ရွေးပြီး သတ်သတ် တ၀ိုင်းစီ ထိုင်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဒါကားသမား ၀ိုင်းလို့ စားပွဲထိုးလေးကို ပြောပြီး မှာစားချင်တာတွေကို မှာစားပါတော့တယ်။ အဲဒီလို လုပ်နေတာကို အလိုက်ကန်းဆိုး မသိတဲ့ ကောင်တွေက ကျွန်တော်တို့ ၀ိုင်းဘက်ကို ပြောင်းပြောင်း ပြီးလာထိုင်နေလို့ မကြာခဏ မောင်းထုတ်ရတာလဲ အမောပေါ့။
ကားသမား အယောင်ဆောင်တာ ကျွန်တော်နဲ့ ဒီသုံးယောက်ပေါ့
တစ်ခု ကောင်းတာက ပုသိမ် အစားအသောက် ဈေးက ရန်ကုန်နဲ့ တခြားစီပဲ။ မုန့်ဟင်းခါး တစ်ပွဲ အကြော်နဲ့ တစ်ရာ ငါးဖယ်နဲ့ မှ ၁၅၀။ ရန်ကုန်မှာ ဆိုရင်တော့ အလွတ်ဆိုရင် ၃၀၀ ငါးဖယ်နဲ့ ၄၅၀ ဟင်းရေထပ်တောင်းရင် ငါးဆယ်။ အဲဒီဆိုင်မှာက နန်းကြီးသုပ် တစ်ပွဲကို ကြက်သား ကြက်ဥနဲ့ ၄၀၀ ပဲရှိတယ်။ အဲလို စားပြီးသောက်ပြီးတော့ ပိုက်ဆံရှင်းချိန် ရောက်လာတယ်။ စားပွဲထိုးလေးက ပိုက်ဆံတွက် မလို့လုပ်ကာရှိသေးတယ် ဟေ့ကောင် ဒါကားသမားတွေ ၀ိုင်းကွလို့ ပြောလိုက်တော့ ကြောက်ကြောက်နဲ့ လည့်ထွက်သွားပါတယ်။ ပြီတော့ ကောင်တာမှာ သွားပြောတယ်။ ကောင်တာက သူကိုဘာပြောလိုက် သလဲမသိဘူး ကျွန်တော်တို့ ၀ိုင်းမှာ ပိုက်ဆံလာ မတောင်းရဲတော့ ပါဘူး။ ဟုတ်တယ်လေ သူတို့ဆိုင်မှာ လူလေးဆယ်တောင် အားပေးနေတာ လေးယောက်စာ လောက်တော့ ဒစ်စကောင့်ပေး သင့်တာပေါ့။
ဒါပေမယ့် ပြသနာက ကျွန်တော်တို့ ၀ိုင်းထဲက ကောင်က လိပ်ပြာမလုံဘူးဗျ။ တကယ်လို့ ကာသမား အစစ်တွေ ကားပြင်တဲ့ ဆီကနေပြန်လာရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲတဲ့။ ကျွန်တော်ကလဲ စိတ်ချပါကွာ ကားသမားတွေ လာတာနဲ့ ကားကိုထွက်ခိုင်းတော့မှာ မပူပါနဲ့ လို့ပြောလိုက် ရပါသေးတယ်။ နောက်တော့ ကားရောက်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်တွက် ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ ကားသမားတွေကို တခါတည်း မောင်းခိုင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကိုယ် တိုင်လဲ နှစ်ထောင်ကျော်လေးနဲ့ လိပ်ပြာမလုံတာကြောင့် ကျသင့်ငွေကို ဆိုင်ကို ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆိုရှင်က အရေးထဲမှာ လော်ဂုတ် ချော်နေ လိုက်တာ ကိစ္စမရှိပါဘူးတဲ့။ သူကိစ္စမရှိပေမယ့် ကိုယ့်လိပ်ပြာ မလုံတာကြောင့် ပေးထားခဲ့ လိုက်ပါတယ်။
ပုသိမ်ကထွက် ပြီး င၀န်မြစ်ကို ကျော်ပြီဆိုတာနဲ့ ငွေဆောင်နဲ့ ချောင်းသာ လမ်းခွဲကို တွေ့ရပါတယ်။ အရင်ကတော့ ချောင်းသာ သွားချင်ရင် ဧရာဝတီမြစ် (ယုခုဗိုလ်မြတ်ထွန်း တံတားနေရာ ညောင်တုန်း) နဲ့ င၀န်မြစ်ကို ဇက်နဲ့ကူးရပါတယ်။ သတင်းစာ ထဲကလေ သံအတိုင်းပြောရရင် အခုတော့ နိုင်ငံတော်က ငွေကြေးမြောက်များစွာ အကုန်ကျခံပြီး တံတားကြီးတွေ တည်ဆောက်ပေးထားတဲ့ အတွက် နေရာဒေသ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ကို အချိန်တို အတွင်းမှာ လျှင်မြန်လွယ်ကူစွာ သွားနိုင်ပြီ ဘာညာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုရှိတာက မြန်မာနိုင်ငံမှာ တံတာကြီးတစ်ခု ဆောက်ရင် နိုင်ငံတော်က ကုန်ကျတဲ့ စရိတ်က တံတားတန်ဖိုးရဲ့ သုံးဆရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တစ်ဆကတော့ တံတားဖြစ်သွားတာ။ ကျန်တဲ့ နှစ်ဆကတော့ ဘယ်ရောက်သွားလဲ သိဘူး။ ရေထဲကျသွား တယ်ထင်တာပဲလေ။ ဒီနေရာမှာ အလျှင်းသင့်လို့ ပြောပြရရင် ကျွန်တော်တို့ နယ်မြို့နားလေမှာ အရှေ့တောင် အာရှရဲ့ အကြီးဆုံး သဖမ်းဆိပ် ရေလှောင်တံမံဆောက် တုန်းကဆိုရင် အရာရှိ အဆင့်တောာင် မဟုတ်ပါဘူး။ ကားဒရိုင်ဘာက တောင်တိုက်ဆောက်တယ်။ ကားကို ကိုယ်တိုင် မမောင်းဘူး အငှားမောင်းတဲ့လူနဲ့ ဘာနဲ့။ ကားပျက်ရင် အစိုးရပြင်တာကို မစောင့်ဘူး ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကို မန္တလေးအထိ ဆင်းပြင်တယ်။ ကားထွက်မှ ဆီရမယ်။ ကားပျက်တော့ ဆီမရဘူး။ ဒီတော့ ကားကောင်းအောင် အစိုးရပြင်ပေး တာမစောင့်တော့ဘူး ကိုယ်ဘာသာကို ပြင်တယ်။ အဲလောက်ထိ ကြိုးစာကြတာ။ ဒါကတော့ ထားလိုက်တော့ မဟုတ်ရင် အာတီကယ် တစ်ခုဖြစ် သွားလိမ့်မယ်။
င၀န်မြစ်ကနေ ငွေဆောင်ကို မိုင်သုံးဆယ်ကျော် ချေင်းသာကို မိုင်နှစ်ဆယ် ကျော်ဝေးပါတယ်။ ငွေဆောင်ဟာ ကမ်းခြေအလျှားမိုင် ကိုးမိုင်ခန့်ရှိပြီး ချောင်းသာကတော့ သုံးမိုင်ဝန်း ကျင်လောက်ပဲရှိပါတယ်။ ငွေဆောင်ကမ်းခြေက ချောင်းသာထက် ရွှံ့ကင်းစင်တာကြောင့် သဲတွေကပို ဖြူသလို ရေကလဲ ပိုကြည်တယ် ပိုပြီးလဲလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငွေဆောင်ထက် ချောင်းသာကို သွားတဲ့လူပိုများပါတယ်။ များရတဲ့ အကြောင်းကတော့ ချောင်းသာ ငွေဆောင်တဲ့ အရင် ပေါ်လာတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တော်တော်လေး စည်ကားနေပါပြီ။ ရွာနဲ့ ကမ်းခြေနဲ့လဲ နီးပါတယ်။ ငွေဆောင်ကတော့ မြန်မာလို အသံထွက်ရတာ အဆင်ပြေပေမယ့် နိုင်ငံခြား ခရီသွားတွေ အတွက် Ngwe ဆိုတဲ့စာလုံးက သသံထွက်ရတာ အဆင်မပြေဘူးလို့ ချစ်ဆွေမြင့် ( ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး ၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ) ရေးတဲ့ ဆေင်းပါးတစ်ခုမှာ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အစားသောက် နှင့်ဟိုတယ် တည်းခိုစားရိတ်က အစ ချောင်းသာထက် ဈေးကြီးတယ် လို့ဆိုကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အများစုကတော့ ချောင်းသာကိုပဲ သွားကြပါတယ်။
ကမ်းခြေမှာ ပဲများနေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်
ကမ်းခြေမှာ ဒီလိုပေါကြောင်ကြောင် ကောင်တွေကိုလဲ မကြာခဏတွေ့ရတယ်
တောင်တက်လမ်း မိုင်နှစ်ဆယ် ကျော်ဆိုတာ ကားနဲ့မောင်းရင် တကယ်တမ်းကျတော့ လွန်လွန်းကျွန်လွန်း နှစ်နာရီ ထက်ပိုမကြာ သင့်ပါဘူး။ ကားကြီးတွေ အတွက်ကျတော့ လမ်းကဆိုး ကျဉ်းကလဲ ကျဉ်းပြန်ဆိုတော့ သုံးနာရီလောက် မောင်းမှ ချောင်းသာကို ရောက်ပါတယ်။ ဒါတောင် ချေင်းသာ အ၀င်နားလေးက ဥတိုတံတားပေါ်မှာ ဘင်ကားလေးတစ်စီး ဘိန်းပေါက်နေတာကြောင့် ၁၅မိနစ် ကျော်လောက်စောင့် နေရပါသေးတယ်။ ဥတိုတံတာ ဆိုတာက ချောင်းသာ အ၀င်နားလေးမှာ ရှိတာပါ။ ပေ ၁၅၀ ကျော်လောက်ရှည်ပါတဲ့ တစ်လမ်းမောင်း တံတားလေးပါ။ တံတားလေးက ဆောက်လုပ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၀န်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်စောထွန်း တက်ခါစဆောက်ခဲ့ တာလို့ ပြောကြပါတယ်။ ကာဘီးပေါက်နေတဲ့ နေရာကိုသွား ကြည့်တော့ တံတာက သံချောင်းတွေ သစ်သားတွေက ထိုးထိုးထောင်ထောင်တွေ ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် မကြာခဏဆို သလိုကားဘီများကို ထိုးမိပြီး ပေါက်လေ့ရှိတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ တကယ်တမ်း ခရီးသွား လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ဖို့ဆိုရင်တော့ ကမ်းခြေကို လှပအောင် တန်ဆာဆင် ဟိုတယ်ကြီးတွေ တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး ဆေက်နေရုံနဲ့ တော့ပြီးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လမ်းပမ်းဆက်သွယ် ရေးကို လျှင်မြန်ချောမွေ့အောင် လမ်းနဲ့တံတားတွေကို ပြင်သင့်ပါတယ်။ အခုကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဥတိုတံတားကတော့ အခြေအနေလေး တော်တော်ဆိုးနေပါပြီ။
ကားပျက်တာက တစ်ကြောင်း လမ်းပျက်တာက တစ်ကြောင်းကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ချောင်းသာကို ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ နံနက်ကိုးနာရီ ကျော်နေပါပြီ။ ချောင်းသာ အ၀င်မှာတော့ မနှစ်ကနဲ့ မတူပဲတိုးတက် ပြောင်းလဲနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မနှစ်က ချောင်းသာ အ၀င်နားလေးမှာ ဆေက်လက်စ ဟိုတယ် သုံးလုံးလောက်ကလဲ ဖွင့်လှစ်ထားပါပြီ။ မာလာကြောင့် ပျက်စီးသွားတဲ့ အဆောက်ဦးတွေကို အသစ်ပြန်လည် ပြုပြင် ထားတာတွေကြေင့် ချောင်းသာက မနှစ်နဲ့ မတူပဲပိုပြီးသစ်လွင် လှပနေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မုန်တိုင်းများနဲ့ ပတ်သက်လို့ အလျှင်းသင့် လို့ပြောရရင် ချောင်းသာကို မုန်တိုင်းကြီးနှစ်ကြိမ် ကျခဲ့ဘူးပါတယ်။ ပထမအကြိမ်ကတော့ ၁၉၇၅ ခုနှစ်ကဖြစ်ပြီး သာမှန်မုန်းတိုင်းကြီးတစ်ခု မျှသာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၆ ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့မှာ ချေင်းသာကို အဖျားခတ်သွားတဲ့ မာလာကတော့ ချောင်းသာသက်တန်း တစ်လျှေက်မှာ အကြီးမားဆုံး အပျက်စီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ မာလာဟာ ချောင်းသာ ကမ်းခြေကိုယင်းနေ့နံနက်ကိုးနာ ရီလောက်မှာ ၀င်ခဲ့ပြီး ရှစ်ပေခန့်ရှိတဲ့ ပင်လယ်ဒီလှိုင်းကြီး တက်လာပါတယ်။ မုန်တိုင်းကျချိန်မှာ ဒီရေကျချိန်ဖြစ် တာတစ်ကြောင်း လေတိုက်တဲ့ပုံးစံက ကုန်းတွင်းက တိုက်တာဖြစ် တာကတစ်ကြောင်း အချိန်မကြာမြင့်တာက တစ်ကြောင်းကြေင့် လူသေပျေက်မူတော့ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူတွေ အားလုံးက စူနာမီ လာတယ်ထင်ပြီ အနီးနာက စကားဝါတောင်ပေါ်ကို တက်ပြေးကြတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဟိုတယ်တွေထဲကိုလဲ ရေတွေက လူရင်ဘတ်လောက် ထိရေတွေ ၀င်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဟိုတယ်တစ်လုံးကို ပျမ်းမျှသိန်း တစ်ထောင်ဖိုး လောက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ လိုင်းလိုင်း ဟိုတယ်ရဲ့ မန်နေဂျာက ပြောပါတယ်။ ရှစ်ပေလောက်ရှိတဲ့ လှိုင်းကြီးက တစ်လုံထဲလာလို့ ၊ အကယ်၍များ အဲလိုလှိုင်းလုံးကြီးတွေ ဆက်တိုက် ဆက်တိုက်တာ လာခဲ့ရင် ဒီထက်မက ပျက်စီး ဆုံးရှုံးဖွယ်ရာ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ချောင်းသာ ကမ်းခြေမှာ လက်ရှိဟိုတယ် ၂၃ လုံး နဲ့ တည်းခိုခန်းပေါင်း တစ်ရာကျော်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီဟိုတယ် ၂၃ လုံးထဲမှာ သုံးလုံးက ဒီနှစ်မှ တိုးလာတာလို့ သိရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တည်းမဲ့ဟိုတယ် ကိုရောက်တော့ ကိုးနာရီကျော်ကျော် ရှိပါပြီ။ အားလုံး ဘွန်ကင် ကြိုလုပ်ထားတဲ့ အခန်းတွေမှာ သူ့အခန်းကိုယ့် အခန်း သွားနားနေကြပြီ ကံဆိုးသူ ကျွန်တော်တို့ ခြောက်ယောက် အုပ်စုသာလျှင် ဘွတ်ကင်လုပ် ထားသောအခန်းများ မှ ဧည့်သည်များသည် နေ့လယ်၁၂ နာရီမှ အခန်းကထွက် မည်ဖြစ်သောကြောင့် စောင့်ဆိုင်းပေးပါ ဆိုလို့ ဒီတိုင်းကြီး ထိုင်စောင့် နေရပြန်ပါတယ်။ မတတ်နိုင်ဘူးလေး ကိုယ့်ကုသိုလ်နဲ့ ကိုယ်ပဲပေါ့။ ဒါနဲ့ပဲ ပစ္စည်းတွေကို အခန်းရတဲ့ အုပ်စုက လူတွေဆီမှာ သွားထားပြီး ကမ်းခြေဘက်ကို လမ်းလျှေက် ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
ပင်လယ်ကို လှမ်းမျှော် ကြည့်လိုက်တော့ ပြာလဲ့လဲ့ ရေပြင်ကြီးရယ် မိုးကုတ်စက် ၀ိုင်းကြီးရယ် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ မြင်နေရတဲ့ သဲဖြူကျွန်လေးရယ် ကမ်းခြေမှာ ရေဆော့နေတဲ့ လူတွေရယ်ကတော့ မနှစ်ကအတိုင်း ပြောင်းလဲခြင်းမ ရှိပါဘူး။ ကျွန်တော် အဲလို ကမ်းခြေမှာ လမ်းလျှေက်နေတုန်း ရဲနှစ်ယေက် ဟိုတယ်ထဲကနေ ဖြတ်ပြီးကမ်းခြေကို ဆင်းသွားတာ သတိထား မိလိုက်ပါတယ်။ ခဏလောက်နေတော့ ကျွန်တော်နဲ့ မီတာ တစ်ရာလောက် အကွာမှာရှိတဲ့ ဟိုတယ်တစ်ခုရဲ့ ၀င်းဘေးမှာ လူစုစု လေးကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ စပ်စုသူပီပီ သွားကြည့်လိုက်တော့ လူငါးယေက်လောက် စုဝိုင်းနေတဲ့ အလယ်မှာ ဒေသခံလို့ ယူဆရတဲ့ အသက်သုံးဆယ်ခန့်ရှိ အမျိုးသမီး တစ်ဦးငိုနေပါတယ်။ ရဲနှစ်ယောက်နဲ့ ဝေါ်ကီတော်ကီ ကိုင်ထားတဲ့ လူတစ်ယောက်ကတော့ ဟိုတယ်ဘက်ကို ပြန်ဝင်သွားတာကို တွေ့လိုက်ပါတယ်။
ငိုနေတဲ့ အမျိုးသမီးက ပုဆိုးကွက်ကြမ်းကို ရှပ်အင်္ကျီလက်ရှည်ချုပ် ၀တ်ထားပြီး သနပ်ခါးကို ပါးကြားကွက် ထားပါတယ် ပုခုံးပေါ်မှာ ခရစ်ခွေ လို့ယူဆရတဲ့ ပုဆိုးတစ်ဘက်ကို တင်ထားပြီး ပုဆိုးတစ်ဘက်နဲ့ မျက်ရည် တွေသုတ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်ရပ် ကြည့်နေတုန်းမှာ အရပ်ရည်ရည် ဆံပင်တိုတိုနဲ့ အသက်သုံးဆယ်ခန့်ရှိ လူတစ်ယောက် ရောက်လာပါတယ်။ သူလဲ ကျွန်တော့်လို အပန်းဖြေလာတဲ့ ဧည့်သည်တစ်ယောက် ဖြစ်ပုံရပါတယ်။ သူက ငိုနေတဲ့ ဒေခံအမျိုးသမီးကို မေးပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လဲပေါ့။ အဲဒီအမျိုးသမီးက ငိုနေတာနဲ့ မဖြေနိုင်ပါဘူး အဲဒီမှာ ဘေးမှာရပ်ကြည့် နေတဲ့ ခေါင်းရွက်ဗျပ်ထိုး ဈေးသည်တစ်ယောက် အမျိုးသမီး၏ ဈေးဗန်းကို ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းက သိမ်းသွာတာကြေင့် ဖြစ်တယ်လို့ ရှင်းပြပါတယ်။ ဘယ်က ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းလဲ လို့မေးတော့ ဈေးသည်တွေက ဝေါ်ကီတော်ကီကို ကိုင်ပြီးထွက်သွားတဲ့ လူကိုလှမ်းပြပါတယ်။ အဲဒီမှာ စောစောက အရပ်ရှည်ရှည်နဲ့ လူက ဟိုတယ်ဝန် ထမ်းနောက်ကို လိုက်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ ပွဲကောင်းပြီ ဆိုပြီးတော့ စောစောက လူနောက်က လိုက်သွားပါတယ်။ လူရွယ်က ဟိုတယ်ဝန် ထမ်းကိုမှီ ပြီဆိုတာနဲ့ သူ့ကိုသူ စစ်ဗိုလ် တစ်ယောက်ဖြစ် တယ်လို့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး မိတ်ဆက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ စောစောက ဈေးဗန်းသိမ်းသွားတဲ့ ကိစ္စကိုပြောပါတယ်။
ဈေးသည်တွေကို အစကတည်းက ကမ်းခြေမှာ ဈေးမရောင်းကြဖို့ ဒေသဆိုင်ရင် အာဏာပိုင်တွေက တရားဝင်တားမြစ်ထားတယ် လို့ဟိုတယ်ဝန် ထမ်းကပြောပါတယ်။ ပြီးတော့ ဟိုတယ်ဝင် အတွင်းမှာ ဖြစ်စေ ဟိုတယ် အုပ်တံတိုင်း အပုလေးပေါ်မှာ ဗန်းကို တင်ရောင်းလျှင် ဖြစ်စေ သိမ်းဆည်းလေ့ရှိတယ်လို့ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းက ရှင်းပြပါတယ်။ အဲလိုပြောရင်း ပြောရင်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ စောစောက ငိုနေတဲ့ အမျိုးသမီးနားကို ပြန်ရောက်လာပါပြီ။ အဲဒီမှာ စောစောကငိုနေတဲ့ အမျိုးသမီးက သူဈေးစရောင်းတာ နှစ်ရက်ပဲရှိ သေးပါကြောင်း သူ့ဈေးဗန်းကို ပြန်ပေးဖို့ တောင်းပါတယ်။ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းက စစ်ဗိုလ်ဆိုတဲ့လူကို အခုလို ဆက်ရှင်းပြပါတယ်။
အရင်က ဒီလိုဈေးရောင်းတဲ့လူတွေကို စနေနေ့တိုင်းမှာ ကမ်းခြေကိုသန့်ရှင်း ရေးလုပ်ဆိုပြီး ရောင်းခွင့်ပေး ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရောင်းတဲ့ ငါးကင်တို့ ပုစွန်ကင်တို့က မကျက်တကျက်တွေ ကင်ရောင်းကြပါတယ်။ ကျက်အောင်ကင်ပြီး ရောင်းရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။ သူတို့ကတော့ ပိုက်ဆံရပြီးပြီးရော ဆိုပြီးရောင်းသွားရော။ အဲဒီမှာစားတဲ့ ဧည့်သည်က ညပိုင်းမှာ ဗိုက်နာတာတို့ ၀မ်းလျှောဝမ်းပျက် တာတို့ဖြစ်ပါတယ်။ အခတ်မသင့်ရင် အဖုအပိန့်တွေပါ ထွက်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ချို့ဟိုတယ်တွေမှာ ဆိုရင် ဒီလို ဈေးသည်တွေဆီက အစားသောက်တွေ ၀ယ်မစားကြဖို့ရာ သတိပေးစာ တွေတောင်ကပ်ထားပါတယ်။ ဒါပြင်ပိုဆိုးတာက ခိုးမှုပဲ။ ဧည့်သည်တွေဟာ များသောအားဖြင့် ပင်လယ်ထဲကို ဆင်းတဲ့အခါမှာ ပိုက်ဆံပါသွားလေ့ မရှိပါဘူး။ ဈေးသည်တွေဆီကနေ လာရောင်းတာကို ၀ယ်စား ပြီးမှာ အခမ်းကို ပိုက်ဆံလိုက်ယူ။ ဈေးသည်တွေက ပိုက်ဆံလိုက်ယူ ရင်းအခမ်းအနေထားကို အကဲခတ်သွားပြီး လူမရှိတဲ့ အချိန်ရောက်မှာ ပိုက်ဆံခိုးတာတို့ လှမ်းထားတဲ့ အ၀တ်ရုပ်သွားတာ တို့လုပ်တတ်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာ သက်ဆိုင်ရာက ကမ်းခြေမှာ ဈေးသည်တွေကိ ဈေးလုံးဝမရောင်းဖို့ တားမြစ်ထားတာပါ။ အခုရောင်းနေကြတယ် ဆိုတာကလဲ သူတို့လုပ်စားပါစေတာ့ ဆိုပြီးနာလယ်မှုနဲ့ ခွင့်ပြုထားတာပါ။ လို့ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းက ရှင်းပြပါတယ်။
ဒါဆိုရင် အခုသိမ်းတဲ့ ဗန်းကိစ္စကိုရော ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးမှာလဲလို့ စစ်ဗိုလ်ကမေးတော့။ ဒါကသူ ထွေအုပ်ရုံး ကိုသွားရှင်းရမှာပါ။ အဲဒါကို ထွေအုပ်ကပဲ စည်းကမ်းထုတ် ထားတာပါလို့ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းက ပြောပြီးထွက်သွားပါတယ်။ စစ်ဗိုလ်လဲ ခဏလောက်နေတော့ သူသွားစရာ ရှိတဲ့ နေရာကို ထွက်ခွါသွားပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ ကမ်းခြေမှာစက်ဘီး တစ်စီငှားပြီး လျှေက်စီး နေလိုက်ပါတော့တယ်။ ဟိုတယ်ဝန် ထမ်းပြောတဲ့ စကားတချို့ တကယ်မှန်တယ် ဆိုတာကိုတော့ နောက်ပိုင်းမှာ ပြောပြသွာပါမယ်။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 3:37 AM2ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရန်ကုန်မှာ အခုတလော မီးတွေအဆမတန် ပျက်နေပါသည်။ ရှေ့မီနောက်မီ လူကြီးများရဲ့ အပြောအရ ၁၉၆၅ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၇ အထိ အတောအတွင်းမှာ အခုတစ်လော ပျက်နေတဲ့ မီးက အဆိုးဆုံးပါတဲ့။ တစ်ရက်ကို ခြောက်နာရီပဲ ခွဲတမ်းရတယ်။ အဲဒီခြောက်နာရီ ဆိုတာကလဲ လာချင်တဲ့ အချိန်လာ ပျက်ချင်တဲ့ အချိန်ပျက်။ ဘယ်အချိန်လာမယ် ဘယ်အချိန်ပျက်မယ် ဆိုတာ ဘယ်သူမှ ကြိုမသိနိုင်ကြဘူး။
မီးပျက်လေလေ တိုင်းပြည်ရဲ့ နိုင်ငံခြားငွေ သုံးစွဲမူနဲ့ သစ်တောပြုန်းတီမှုက မြင့်တက် လေလေပဲ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော မီပျက်တော့ မီစက်တွေ ၀ယ်ရတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ မီးစက်ကို ဆင်ပဲဆင်နိုင်ပါသေးတယ် အင်ဂျင်အလုံး လိုက်မထုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ ဒီတော့ လိုတဲ့ အင်ဂျင်ကို နိုင်ငံခြားက ၀ယ်ရတယ်။
ရန်ကုန်မြို့မှာ မီးနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းလေးတွေ အများကြီးပါ။ တခြားမကြည့်နဲ့ ကွန်ပျူတာစာစီ နဲ့ မိတ္တူဆိုင်တင်ကို နည်းတာမှတ်လို့။ အဲလိုမီးပျက်တဲ့ အတွက် စက်နိုးရတယ်။ စက်ဆိုတာကလဲ ရေထည့်မောင်းလို့ရတာမဟုတ်တော့ ဆီထည့်ရတယ်။ ဆီဆိုတာကလဲ နိုင်ငံခြားက ၀ယ်ရတာ။
အဲဒီမှာ ကုန်ထုတ်လုပ် ငန်းတွေက စက်နိုးပြီး အလုပ်လုပ် ရလို့ ဈေးတက်တာက တစ်ခါတက်။ အဲလိုဆီဝယ်လိုအား ကောင်းလာတော့ ဆီဈေးက တက်ပါရော။ ဆီဈေးတက်ပြန်လို့ ဆိုပြီးဈေးက နောက်ထပ်ထပ် တက်။ အဲလိုအဲလို ထပ်ထပ်တက်တက် တက်တက်တက် တက် လိုက်ကြတာ။ နောက်ဆုံးတော့ ဆက်ပြောရင် ပေါ်လစီတွေပါရော့မယ်။ အဓိကပြောချင် တာကတော့ မီးပျက်တယ်။ ခဏခဏပဲ...............
တစ်ခါ တစ်လေကျတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားပြောနေရင် ပျက်သွားရင် ဒီကောင် ငါ့ကိုမခေါ်ချင်တော့လို့ မီးပျက်တယ်လို့ လိမ်တာ ထင်တယ် လို့အောင်းမိ သွားကြမလားပဲ။ အင်တာနက် သုံးတဲ့ လူတိုင်အလို အထင်လွဲခံရမှုမျိုး မကြာခဏဖြစ်လိမ့် မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲလို အထင်လွဲ မှုမျိုးများ ရှိနေခဲ့ ကြရင်လည်း လျှပ်စစ်မီး တကယ်ပျက်နေပါတယ် နားလည် ပေးလိုက်ကြပါလို့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 11:09 PM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 8:27 PM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
မနက်ဖြန်ဆိုရင် ချောင်းသာကို သွားမည်။ အော်ကို ရွှေချောင်းသာ ခင်ဗျားနဲ့ ကျွန်တော် တွေ့ရဦးမှာပေါ့လေ။
တကယ်တော့ မနက်ဖြန်သွားမဲ့ ချောင်းသာခရီးက ကျွန်တော့်အတွက် တော့ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် ဖြစ်သည်။ မနှစ်ကလည်း သင်္ကြမကျခင် သုံးရက်လောက် အလိုမှာ သွားပြီး သင်္ကြန်အကြိုနေ့ မှာပြန်လာသည်။ ပြီးတော့ ရန်ကုန် သင်္ကြန်ကို ဆက်နွဲသည်။ ဒီနှစ်တော့ ရန်ကုန်သင်္ကြန်ကို နွဲဖြစ် လိမ့်မယ်လို့ မထင်။
ချောင်းသာလိုကမ်းခြေ မျိုးက သုံးရက်ထက် ပိုနေလို့ မကောင်းဟု ထင်မိသည်။ ကျွန်တော့် အမြင်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ သုံးရက်လောက် နေပြီးရင် လည်စရာက ကုန်သွားပြီ။ လိုင်းပုတ်နေသော ကမ်းခြေကြီး ကလဲ အသစ်ဖြစ် မလာ ရိုးသွားပြီ။ သို့သော် ကမ်းခြေတွင် ထိုင်ပြီး ကဏန်းကျော်လေး နှင့် ဘီယာထိုင် သောက်ရသည့် အရသာကတော့ ရိုးသွားသည်ဟု မထင်မိပါ။ ဒီလိုပြောရင် မင်းကတော့ ဘီယာသမားကို လို့ပြောကြမည်လား မသိ။
ချောင်းသာမှာ ကျွန်တော်လေ့လာ ကြည့်သလောက် ဒေသထွက်ကုန် ဟူ၍မည်မည် ရရ မရှိပါ။ ငါးခြောက် တို့ ပုစွန်ခြောက် တို့ကလဲ အပြင်တစ်နေရာက ယူရောင်းကြသည်။ ဆန်ဆိုလည်း ပုသိမ်က မှာရသည်ဟု ဆိုသည်။ ကုန်ကုန်ပြောရင် ပင်လယ်မှာ ထွက်တဲ့ ခရုက အစ ချောင်းသာမှာ မထွက်သလောက်ပင်။ ခရုခွံလေး နို့ဆီဘူး တစ်လုံးလောက်ရဖို့ အရေး ကမ်းခြေ ကနေ နှစ်မိုင်လောက် ပိုက်စိတ်တိုက် ရှာရသည်။ ချောင်းသာမှာ ရောင်းနေသော ခရုများက တခြား တစ်နေရာက တစ်ဆင့်ဝယ် ရောင်ခြင်း ဖြစ်ကြသည်။
အဲလို အတင်းတုပ် မှာကို ကြိုမြင်လို့လား တော့မသိဘူးဗျာ ကိုရွှေချောင်းသာက ကျွန်တော့ကို မနှစ်က ဒုက္ခပေးလိုက်သည်။ အင်းဖြစ်ပုံကတော့ ဆိုးပါတယ်။
ချောင်းသာ ရောက်ပြီး ဒုတိယ နေ့တွင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ အုပ်စုက လူတွေကို အုပ်စုနှစ်စု ခွဲပြီး ကမ်းခြေမှာ ဘော့လုံးကန်ကြသည်။ သူများတွေကတော့ ရေထဲဆင်းဖို့ ဆိုပြီး ဘောင်ဘီ အသစ်တွေ ၀ယ်လာကြသည်။ ကျွန်တော်ကတော့ ပင်လယ်ရေ ထိရင် အ၀တ်တွေ ဆွေးတတ်တယ်လို့ ကြာဖူးတာကြောင့် ပင်လယ်ထဲ ဆင်ဖို့ ဘောင်းဘီ သီခြား ၀ယ်မနေတော့။ လွန်ခဲ့ တစ်နှစ် ကျော်လောက်က မ၀တ်ပဲပစ်ထားတဲ့ ဘောင်ဘီ အဟောင်းတွေ ယူလာသည်။ အခုလို ဘောလုံး ကန်တော့လဲ ဘောင်းဘီ အဟောင်းနဲ့ ပင်ကန်ဖြစ်သည်။
အဲဒီမှာ ပြသနာက စတော့တာပေါ့။ ကန်နေတုန်း တန်းလန်းကြီးမှာ ဘောင်းဘီက ဂွပြဲသွားသည်။ ပြဲတာမှ နည်းနည်းနောနော မဟုတ်။ ဘောင်းဘီး နှစ်ခြမ်းနီးနီး ကွဲသွားအောင် ပြဲသွားသည်။ အဲဒီမှာ သေတာပေါ့။ ဘေးမှာကလဲ ဆော့ကစားနေတဲ့ မိန်းကလေးတွေက နည်းတာမဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ မဖြစ်ချေဘူး ရေထဲဆင်းနေမှ ဆိုပြီး ရေမှာပဲ လူတွေနဲ့ ခပ်ဝေးဝေး ကနေဆော့နေ လိုက်တော့သည်။ ကျွန်တော်တို့ အုပ်စုက လူတွေ ပြန်တော့မှာ ဆိုတော့ ဟိုတယ်ရောက်ရင် ဘောင်းဘီဒါမှ မဟုတ် ပုဆိုး လာပို့ပါလို့ မှာလိုက်သည်။ တစ်ယောက် တည်းမှာရင် မသေချာ မှာ စိုးလို့ နှစ်ယောက် သုံးယောက် လောက်ကို မှာလိုက်သည်။
နံနက် ၁၀ နာရီ ခွဲလောက်ရောက်တော့ နေအရှိန်က မြင့်လာသည်။ ကမ်းခြေမှာ လည်းရေကစား နေတဲ့ သူတွေက မရှိသလောက် နီးပါး ကျဲသွားပြီ။ ဟိုနွားတွေ ပြန်သွားတာက နာရီ ၀က်လောက်ရှိပြီ ပုဆိုးလာပို့ မဲ့လူက ရောက်မလာသေး။ သောင်ပြင်မှာ ပစ်ထားခဲ့တဲ့ ဘောကွင်များကို လိုက်သိမ်းနေတဲ့ ကလေးကို ဘယ်နှစ်နာရီ ရှိပြီလဲလို့ မေးလိုက်တော့ ၁၁ နာရီတဲ့။ လာကောင်းပါ ရဲ့ ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ပဲကျွန်တော် ရေထဲမှာ ဆက်စိမ်နေသည်။
လူတွေ အားလုံးရှင်း သွားကြပြီ ရေထဲမှာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း ။ ကျွန်တော်နဲ့ မီတာ လေးရာလောက်မှာတော့ နိုင်ငံခြား သားစုံတွဲ နှစ်ဦး စက်ဘီးစီးနေသည်။ သေချာပြီ နွားတွေ ကျွန်တော့်ကို မေ့နေကြပြီ။ အပူဒါဏ်ကြောင့် အသားတွေလဲ နီရဲနေပြီ။ ဒီပုံအတိုင်း ဆိုရင် တစ်နေကုန် ရေထဲမှာ စိမ်နေရမည့် ကိန်း။ ဒီလိုမှန်း သိရင် စောစော ကဘောကွင်း လိုက်ကောက်နေတဲ့ ကလေးဆီက ပုဆိုးငှားလိုက်သည်။ အခု တော့ အဲဒီကလေးလဲ မရှိတော့။ အင်း ကမ်းခြေမှာ အုန်းရည် ထိုင်ရောင်းနေတဲ့ မိန်းမကြီးကတော့ ကျွန်တော့ ကိုလှမ်းကြည့်နေသည်။ သူ့ကို အော်ခေါ်ပြီး အကူညီတောင်းရင် ကောင်မလား။ ကျွန်တော် ဝေခွဲလို့မရ။ မထူးပါဘူး အုန်းရည် ရောင်းနေတဲ့ အဒေါ်ကြီးကို လှမ်းခေါ်လိုက်သည်။ အဒေါ်ကြီးက ကျွန်တော်ရှိတဲ့ ကမ်းစပ်ကို ဆင်းလာပြီ။ ခေါ်ပြီးကာမှ မှားများမှားနေမလား ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ချိတုန်ချ တုန်ဖြစ်နေသည်။ အဒေါ်ကြီး ကျွန်တော်နဲ့ စကား ပြောလို့ ရနိုင်တဲ့ အကွာဝေးကို ရောက်လာပြီ။
ကျွန်တော် ဘာပြောရမှန်း မသိတတ်
နောက်ဆုံးတော့မှ နွားတစ်ကောင် ပုဆိုးလေးကို ကိုင်မြောက် ပြီးကမ်းစပ်ဆီသို့ ပြေးလာသည်။ နွားပြေးလာ တာကို မြင်မှ ကျွန်တော်လဲ သက်ပြင်းချပြီး အုန်းရေ သောက်ချင်လို့ ဟုပြောလိုက်ရသည်။
ဒါများမောင်ရယ် စခေါ်ကတည်းက အုန်းရေလို့ အော်လိုက်ရင် ပြီးတာပဲ
ဆိုပြီး ပြန်တက်သွားသည်။ ကျွန်တော့ ဒုက္ခကိုကား အဖွားကြီးမသိလိုက်။ နောက်ဆုံးတော့ ချောင်းသာမှာ ပင်လယ် ဂဏန်းတွေ မပေါတာကို ကြံဖန် ကျေးဇူးတင်လိုက် ရပါတော့လိုက်ရပါတော့ သည်။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 2:55 AM3ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရည်ညွှန်း: joke, ချောင်းသာ
ကမ္ဘာမြေမှာ နှင်းဆီတွေ အကြိမ်ကြိမ်ပွင့်ခဲ့ ပြီ
နှင်းဆီတွေပွင့်လာ တာလောက်ငါ့ ဘ၀ကို ခမ်းနားစေတဲ့အရာ မရှိခဲ့ဘူး
ဒ‘ီနေ့တော့ ငါ့ရင်မှာ နှင်းဆီတွေ မျိုးတုံးကုန်ကြပြီ
နင့်ကိုဒီနေ့လာပေးတာ ငါ့ဘ၀အတွက်နောက် ဆုံးနှင်းဆီပါ
နမ်းရှိုက်လိုက်ပါချစ်သူ လို့မတောင်းဆိုပါဘူး ဆန္ဒအတိုင်းပါ ချစ်သူ
ငါ နင့်အခန်း ထဲကိုရောက်တဲ့ အချိန်မှာ အေးစိမ့်တဲ့ အထိတွေ့ ကိုခံစားရတယ်။ နင်က အဲကွန်းကို ပါဝါမြင့်ပြီး ဖွင့်ထားတာကို။ ဒီနေ့ ငါနင့်ကို ပေးဖို့ ကျန်နေသေးတဲ့ နောက်ဆုံးနှင်းဆီပွင့်ကိုလာ ပေးတာပါ။ နှင်းဆီပွင့်နဲ့ အတူကဗျာလေး တစ်ပုဒ်ပါတယ်။ နင်ဖတ်တာ မဖတ်တာ ငါ့အပိုင်း မဟုတ်ဘူးလေ။ အဓိက ငါလာသွား တယ်ဆိုနင်သိရင် ရပါပြီ။ ငါနင့်ကို ပြောထားတဲ့ အတိုင်း နှင်းဆီ ခြေက်ပွင့်ကို နင့်ဆီကို အရောက်ပို့ ခဲ့ပြီးပြီလေ။ ဒီညက ၇ ပွင့်မြောက် နောက်ဆုံးနှင်းဆီလာ ပို့တဲ့ညပေါ့။
ချစ်သူရယ် နင်ကတော့ မိန်ဖျော့ဖျော့ မီးရောင်အောက်မှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မောကျနေလေရဲ့။ ချစ်သူရယ် နင့်မျက်နှာလေးကို ငေးကြည့်ရင်း သြော် ..... နမ်းရှိုက်ခွင့် မရှိတော့ပါလား။
ငါယူလာတဲ့ နှင်းဆီတစ်ပွင့်နဲ့ ကဗျာလေးကို နင့်မှန်တင်ခုံပေါ်မှာတင်ထားပြီး ငါဟာ နင့်အနားက အပြီးခွဲရတော့မှာပါလား ဆိုတဲ့အသိက ငါ့နှလုံးသား ကိုရိုက်ခတ်လာတယ်။ ချစ်သူရယ် ဘာကြောင့်များ လမ်းခွဲ ချင်ရတာလဲကွာ။ ဖြစ်နိုင်ရင် နင့်နားလေးမှာ တစ်ညလုံး ထိုင်ပြီး ငါ့ရင်ဘတ် ထဲကခံစားချက်တွေကို ဖွင့်ထုတ် နေလိုက်ချင်တယ်။ ချစ်သူ. . . နင်နဲ့ငါ ချစ်ကြတုန်းက နင်ငါ့ကိုပေးထားတဲ့ လက်ဆေင်လေးတွေကို ငါအမြတ် တနိုးသိမ်း ဆည်းထားပေမယ့် နင့်အခန်းထဲမှာ တော့ငါပေးခဲ့တဲ့ လက်ဆေင်နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူတဲ့ အရာလေးတောင်မရှိပါလား။
ကောင်မလေးရေ ငါပြန်ရတော့မယ် ငါနုတ်ဆက်တယ်နော်။ ဒါပေမယ့် အရမ်းအေးတဲ့ အဲကွန်းကိုတော့ လျှော့ထားခဲ့တယ်။ နင်ကိုယ်ပေါ်က စောင်ကိုလဲ ငါဆွဲတင်ပေးထားခဲ့ တယ်။ နင်အအေးပတ် နေမှာစိုးလို့ပါ။ နင့်ကိုငါ စောင်ချုံပေးရင်းနဲ့ နင့်ရဲ့ နဖူးလေးကို နမ်းရှိုက်လိုက်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကောင်မလေးရယ် ငါ့တို့စည်း ခြားခဲ့ကြပြီလေ။ နင့်ကို ငါဆက်ချစ် နေသေးပေမယ့် နင်ငါ့ကို မချစ်တော့လို့ သားခဲ့စည်းကို ငါမကျော်ပါဘူး ကောင်မလေးရယ်။
အဲကွန်းကြောင့် အေးစိမ့်နေတဲ့ နင့်အခန်းထဲက ငါထွက်လိုက်တော့ ပြင်ပလေက နွေးထွေးနေသလိုပဲ။ ငါလာရာလမ်း အတိုင်း ပြူတင်းပေါက် ကနေအပြင်ကို ဆင်းခဲ့တယ်။ အလာတုန်းက လိုပဲ အုပ်နံကို ကျော်ရမှာ။ အလာတုန်းက တော့သွေးပူပူနဲ့ မို့ ကျော်ရတာ ဘာမှ မဖြစ်သလို ရှိပေမယ့် အပြန်မှာတော့ နဲနဲ ခက်နေသလိုပဲ။ တော်သေး တာပေါ့ နင်တို့ အိမ်က ခွေးသေ သွားပြီး နောက်ထပ် မွေးမထားလို့။
ငါအုပ်တံတိုင်းကို စတက်ဖို့ ပြင်လိုက်ပြီးမှ နင့်ရဲ့ အိပ်ခန်းလေးကို ငါတစ်ချက်လှမ်း ကြည့်လိုက်တယ်။ ငါနင့် အိပ်ခန်းကို လှမ်းကြည့်နေတုန်းမှာ နင်တို့ ဆင်ဝင်အေက်က မီးပွင့်လာတယ်။ သေချာပြီ နင်တို့ အိမ်ကလူ တစ်ယောက် နိုးလာတာ။ ငါအုပ်တံတိုင်းကို ကပြာ ကရာ ပြေးတက်လိုက်တယ်။ ငါတက်နေတုန်းမှာ နင်တို့ အိမ်ရှေ့တခါး ပွင့်လာပြီး လူတစ်ယောက် ပြေးထွက်လာတယ်။
ငါအသံကို ဂရုမစိုက်နိုင်ဘူး ငါလွတ်ဖို့ ရာပဲ အားခဲနေတယ်။ ငါအုပ်တံတိုင်းပေါ်က နေလမ်းဘက်ကို ခုန်ချပြီး လမ်းမကြီးအတိုင်း ဆက်ပြေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကောင်မလေးရယ် နှစ်လမ်းသုံး လမ်းပဲ ပြေးလိုက်ရတယ် ခွေလဲကျသွားတယ်။ ငါဆက်ပြေးဖို့ အားယူထပေ မယ့် ဘယ်ဘက်ခြေ ထောက်က မထောက်နိုင်တော့ဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာ နင်တို့ အိမ်ထဲက ပြေးထွက် လာတဲ့ လူက ငါ့ခေါင်းကို သူ့လက်ထဲက တုတ်နဲ့ ရိုက်လိုက်တယ်။
ငါ့ခေါင်းထဲက ကိုက်နေတယ်။ ငါမျက်လုံ ဖွင့်လိုက်တော့ ငါ့ဘေးနာမှာ သူနာပြုဆရာမလေး တစ်ယောက် ထိုင်နေတယ်။
အဲဒီအသံ ကိုငါရင်းရင်း နှီးနှီး ကြာဖူးသလိုပဲ။ မျက်လုံးတွေက အလင်းရောင်မှာ ကျင့်သားမရ သေးလို့ သူ့မျက်နှာ ကိုသေချာမမြင်ရဘူး။ မျက်လုံး တွေက ကျင့်သားရလာတော့ သူနာပြုဆရာမလေး ရဲ့မျက်နှာက တစ်ဖြေးဖြေး ပီပြင်လာတယ်။
ဟုတ်လို့ လား။ အမေက သူနာပြုဆရာမကနေ ငါတို့ ငယ်ငယ် လေးကတည်းက အငြိမ်းစား ယူခဲ့တာပဲ။
ဟုတ်တယ် သား ။ ဒီဆေးရုံက စည်းကမ်းကြီး တယ်။ လူနာရှင်ကို တစ်ယောက်ပဲ ၀င်လို့ရတယ်။ ဒါကြောင့် အမေက ယူနီဖောင်း ၀တ်လာရတာ။
အမေ တစ်ယောက်တည်း လာတာပဲ ယူနီဖောင်း ၀တ်စရာလို လို့လား
မဟုတ်ဘူး။ အမေက လူနာရှင် အနေနဲ့ လာတာ မဟုတ်ဘူး သူနာပြု ဆရာမ တစ်ယောက် အနေနဲ့ လာတာ။သားရဲ့ လူနာရှင်က ဟိုမှာ ။
ငါ့လူနာ ရှင်ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ လို့လှမ်း ကြည့်လိုက်တော့ ကောင်မလေး နင်ဖြစ်နေတာကိုး။
အဲဒီ အချိန်မှာ နင်က အနောက်တိုင် သတို့သမီး ၀တ်စုံ အဖြူရောင်ကို ၀တ်ထားပြီး လက်ထဲမှာ ပန်းခြင်းတစ်ခုကို ကိုင်ထားတယ်။ ပြီးတော့ ငါ့ကုတင်ရှိရာကို တဖြည်းဖြည်းချင်း လှမ်းလာနေတယ်။ ပန်းခြင်းထဲက နှင်းဆီတွေကလည်း ရဲရဲတောက်နေတယ်။
လူနာ လာမေးတာက ပန်းခြင်းကြီးနဲ့ အဆန်းပါလား
ဒါဆိုရင် ဘာလာလုပ်တာ လဲ
ဘာ......။ ဘယ်သူ့ အတွက်လဲ
ဟာ။ ဘာဆိုင်လို့ လဲ
အစ်ကိုက မကြာခင်ဆိုရင် သေတော့မှာလေ
နင်ငါကို အဲလို ပြောလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ငါ့ဘ၀ကြီး တကယ်သေ သွားတာထက် ပိုပြီး ခံစားလိုက်ရတယ်ချစ်သူ။ တကယ်ပါ ချစ်သူ။ မင်းသာ အဲလို လွမ်းသူ့ပန်း ခွေလာချပေး မယ်ဆိုရင် ဒီဘ၀တစ်ခု တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဆယ်ဘ၀စာ သေပေးလိုက်ချင် ပါတယ်ချစ်သူ။
ပြီးတော့ နင်ငါ့ကို နှင်းဆီပန်း တစ်ပွင့် ပန်းခြင်းထဲကနေထုတ် ပေးတယ်။ ငါနင်ပေးတဲ့ နှင်းဆီပန်းလေးကို လှမ်းယူလိုက်တယ်။ နင်ပေးတာ လှပပြီး နှစ်လိုဖွယ်ရာ ကောင်တဲ့ပန်းလေး ဖြစ်ပေမယ့် လှပခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်က ဆူးတွေက ငါ့နှလုံးသား ကိုစူဝင်သွားခဲ့ကြပြီလေ။ အဲဒီဆူးတွေထဲမှာ အဆိပ်တွေ ပါတယ်ဆိုတာကိုတော့ နှလုံးသားထဲက ဆူးကို ပြန်နုတ်ယူလို့ မရနိုင်တော့တဲ့ အချိန်ရောက်မှ သိလိုက်တယ်။
ငါမျက်လုံးတွေ ပြာဝေလာပြီ။ ကောင်မလေးရယ် ငါတကယ်ပဲ သေရတော့မှာလား။ ငါအားကိုးလို့ ရမလားလို့ ကြည့်လိုက်တော့ အမေက မရှိတော့ဘူး။ နင်ကတော့ ငါ့ကို ကြည့်ပြီး ၀မ်းနည်းနေမလား ဟားတိုက် ရယ်နေမလား ငါမသိတော့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ငါ သေသွားပြီလေ
ဟုတ်တယ် ကောင်မလေး။ နင်ငါ့ကို အဆက်ဖြတ် ပြီးခဲ့တဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ အဲလိုခြောက်ခြားဖွယ်ရာ အိမ်မက်တွေက ငါ့ကို လာပြီး နိုးဆွနေကြတယ်။ အိမ်မက် ဆိုးတွေ ဘယ်လောက် မက်မက် ငါကတော့ နင့်ကို အချစ်တွေ မပျက်သေးပါဘူး။ ငါ့နင့်ကို ပြောခဲ့ တဲ့အတိုင်း နှင်းဆီ ခုနှစ်ပွင့် ပြည့်အောင် ပေးသွားမှာပါ။
ပထမဆုံးအကြိမ်မှာ နှင်းဆီလေးပွင့် ပေးမယ်။ ဒုတိယ အကြိမ်မှာ နှင်းဆီနှစ်ပွင့် ပေးမယ်။ နောက်ဆုံး အကြိမ်မှာ နှင်းဆီ တစ်ပွင့် ပေးမယ်။ အဲလို နောက်ဆုံး နှင်းဆီ ပေးပြီးသွားရင် ငါနင့်ကို ပြောထားတဲ့ အတိုင်း လုံးဝမေ့လိုက်မယ်။ ငါဆိုတဲ့ ကောင်ကလဲ ငါပဲ။ နင့်ကို နောက်ဆုံး နှင်းဆီ ပေးပြီး သွားတဲ့နေ့ မှာ နင့်ကိုငါ မုန်းလိုက်မှာ မဟုတ်ဘူးနော်။ မုန်းလိုက် မှာမဟုတ်လို့ ဆက်ချစ်နေဦးမှာလား လို့လဲ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ ငါ့ဦးနှေက်ထဲက နင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဒေတာတွေကို ဒလိလုပ်လိုက်မှာ။ ဒါကြောင့် နင်အပေါ်မှာ ချစ်ခြင်းမုန်း ခြင်းတွေ မရှိတော့သလို နင်ဆိုသော ကောင်မလေးကလဲ ငါ့ဦးနှေက်ထဲမှာ ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။
ငါပန်းဆိုင်ကနေ နှင်းဆီလေးပွင် ၀ယ်လာတယ်။ ပန်းတွေရဲ့ အရိုးတွေက တိုနေတော့ ထုပ်ရတာ မလှဘူလို့ စတိုးဆိုင်က အစ်မကြီးက ပြောတယ်။ ပြီးတော့ ကတ်သီးကတ်သတ် လေးပွင့်ပေး ရတယ်လို့ ပန်းက ငါးပွင့် ဒါမှ မဟုတ်ရင် သုံးပွင့်မှ ထုပ်ရတာ လှတာတဲ့။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အချစ်တွေလေး နက်တယ်ဆိုတာ အဓိပ္ပယ်ပေါ်လွင်အောင် လို့ပါလို့ ဆိုင်ရှင်ကို လွယ်လွယ်ပဲ ပြောလိုက်တယ်။ ဆိုင်ရှင်ကို ကြည့်ရတာ ငါ့ရဲ့ စကားကို ဘ၀င်မကျသလိုပဲ။
ငါနင်တို့ အိမ်ရှေ့ကိုရောက်သွာတော့ နေ့လည် ၁၂ နာရီကျော်ပြီ။ နင်တို့ ခြံတံခါးက ဖွင့်ထားတယ်။ အပြင်မှာ နင့်အဖေ အပါဝင် တရုပ်လိုလို လူကြီးလေး ငါးယေက်လောက် ထိုင်နေကြတယ်။ ငါ ဖွင့်ထားတဲ့ နင်တို့ တခါးဝမှာ ရပ်လိုက်တော့။ စောစော ကလူကြီးတွေက ပြောလက်စ စကားကို ရပ်ပြီး ဘာလဲဆိုတဲ့ အကြည့်နဲ့ ငါ့ကိုကြည့်ကြတယ်။ ဒါအိမ်မက် မဟုတ်ဘူး ဆိုတာတော့ ငါသိလိုက်တယ်။ ဒါပြင်မှာ တကယ်ဖြစ်နေတာ။ အတိ အကျပြောရရင် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့။
ကောင်မလေး နင်တို့အိမ်ဟုတ် သလားလို့ မေးလိုက်တော့။ နင်အဖေက ဟုတ်ပါတယ် ဘာကိစ္စလဲ ဆိုပြီး ထလာတယ်။ ငါကလဲ ချစ်သူများ နေ့တုန်းက လိုပဲပေါ့။ ဂစ်ရှော့ဆိုင်က ပါဆိုပြီး နှင်းဆီပန်းတွေနဲ့ ကဗျာ တစ်ပုတ်ကို နင့်အဖေလက် ထဲမှာ ပေးထားခဲ့လိုက်တယ်။
ကောင်မလေး အဲဒီနေ့က နင်အိမ်မှာ အဆဲခံလိုက်ရသေးလား ဟင် . . .
နင်မပြောနဲ့ ငါကိုယ်တိုင်ကို ဘယ်နေ့လာပို့ မယ် ဘယ်လောက်ကြမယ် ဆိုတာ မသိသေးဘူး။ ငါ့စိတ်ကူးရတဲ့ရက် ကိုလာပို့ မယ်။ လာပို့ရင် ဒီနည်းကို တော့သုံးတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ ရိုးသွားပြီ။ ဘယ်နည်းကို သုံးမှာလဲ
လာမမေးပါနဲ့ ငါကိုယ်တိုင်ကို မသိသေးလို့ပါ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 1:44 AM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
အရာဝထ္တုတစ်ခုပေါ်ကို အား တစ်စုံတရာ သက်ရောက်ခြင်းခံရပါက အားသက်ရောက်ခြင်း ခံရသော အရာဝထ္တုသည် တူညီသော အား တစ်ခုကို တန်ပြန်တယ်လို့ နယူတန်ရဲ့ နိယာမက ဆိုပါတယ်။
နှလုံးဆိုသော အရာဝထ္တုတစ်ခုပေါ်ကို အချစ်ဆိုသော အားတစ်ခု သက်ရောက်ခြင်းခံရပါက အား သက်ရောက် ခြင်းခံရသော နှလုံးသားသည် သက်ရောက်သော အချစ်အင်အားနှင့်ညီမျှသည့် ခံစားချက်တစ်ခုကို တုန့်ပြန်သည်။ ယင်းခံစားချက် တွင် အချစ်ကြီးပဲတုန့်ပြန် တတ်သည်မဟုတ်ပဲ တစ်ခါတစ်ရံတွင် အမုန်းနှင့် နာကျဉ်ခြင်းများ လည်းပါဝင်တတ်သည်. . .
အရှိန်ပြင်းစွာ မောင်းနှင်းနေသော ကားတစ်စီးကို ရုတ်တရက် ရပ်လိုက်ပါက ကားပေါ်တွင် ပါလာသော ခရီးသည်များသည် ကားရပ်သကဲ့ သို့ရပ်တန့်မသွားပဲ အရှိန်ဖြင့်ရှေ့သို့ လဲကျသွားတတ်တယ်လို့ အင်နားရှား သီအိုရီကဆိုပါတယ်။
အရှိန်ပြင်းစွာ မောင်းနှင်လာသော အချစ်ဘတ်စ် ကားကြီး ရုတ်တရက် ရပ်တန့်လိုက်ပါက အချစ်ယာဉ်ပေါ်တွင် စီးနှင်း လိုက်ပါ လာသော နှလုံးသား ခရီးသည်များသည် အလိုက်သင့်ရပ် တန့်သွားခြင်းမရှိပဲ အင်နားရှား သီအိုရီအရ အရှေ့သို့ ဟတ်ထိုး လဲကျသွား တတ်ကြသည်။
အချစ်ယာဉ်သည် တဖြည်းဖြည်းချင်း အရှိန်လျှော့ကာ ရပ်တပ်သွားခြင်းဖြစ်ပါက နှလုံးသား ခရီးသည်များ ဟတ်ထိုးလဲကျမူ သက်သာသော်လည်း အရှိန်ပြင်းမှာ ရုတ်တရက် ရပ်တပ်သွာ ခြင်းဖြစ်ပါက ပိုမို အထိနာတတ်ကြသည် . . .
ရေဇလုံတစ်ခု အတွင်းသို့ အရာဝထ္တုတစ်ခု ထည့်လိုက်ပါ ယင်းအရာဝထ္တု နှင့်တူညီသော ပမာဏရှိသည့် ရေများသည် ပြင်ပသို့ ဖိတ်ကျသွား တယ်လို့ အာခီမီဒီး ရဲ့ နိယာမက ဆိုပါတယ်။
ဘ၀ဆိုသော ရေဇလုံကြီးထဲသို့ အချစ်ဆိုသော အရာဝထ္တုတစ်ခု ကိုထည့်လိုက်ပါက ထည့်လိုက်သည့် အချစ်ပမာဏနှင့် ညီမျှသော ဘ၀အစိတ်ပိုင်းများသည် ပြင်ပသို့ ဖိတ်စင်သွား တတ်ကြသည်။
ပြင်ပသို့ ဖိတ်စင်သွားသော ဘ၀အစိတ်ပိုင်းများသည် တစ်ခါတရံတွင် မပြောပလောက်သော်လဲ တစ်ခါတစ်ရံတွင် အနာဂတ်ဘ၀ကြီး တစ်ခုလုံးကို မဲမှောင်သွားစေသည် . . .
ရေကို နောက်ဆုံး အဆင့်အထိ ဓာတ်ခွဲကြည့်ပါက H2O ဆိုသော အက်တန်လေး သုံးခုသာ ကျန်ကြောင်း ဓာတုဗေဒ သီအိုရီများက ဆိုသည်။
နှလုံးသား တစ်ခုကို နောက်ဆုံး အဆင့်အထိ ဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်ပါက ရေကဲ့သို့ပင် အက်တန်လေး သုံးခုသာ ကျန်ရှိကြောင်းကို တွေ့ရသည်။ ယင်းအက်တန် သုံးခုမှာ ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်း နှင့်ခံစား ခြင်းတို့ ဖြစ်ကြသည်။ ချစ်ခြင်းနှင့် မုန်းခြင်းသည် ဓာတ်သဘောတူ သောအက်တန် နှစ်လုံး ဖြစ်ပြီ H2 နှင့် တူညီသည်။ ခံစားခြင်းသည် သီးခြား အက်တန် ဖြစ်ပြီး O နှင့် တူညီသည်။
ချစ်ခြင်း နှင့် မုန်းခြင်း ဆိုသော အက်တန်လေး နှစ်လုံးသည် နှလုံးသား၏ တစ်ဘက်တစ်ချက် စီတွင် နေရာယူသည်။ ခံစား ခြင်းဆိုသော အက်တန်လေးသည် သီးခြားနေရာမရှိပဲ ချစ်ခြင်းနှင့် မုန်းခြင်း ပေါ်တွင်လည့်ပတ်သွားလာသည်။ ယင်းသိုလည့်ပတ်ရာတွင် ချစ်ခြင်း ဘက်အခြမ်း တွင်ရောက်နေပါက ချစ်သည်။ ချစ်ရင်း ချစ်ရင်း အချစ်တွေ ဂိတ်ဆုံး သွားပါက အမုန်းဘက် အခြမ်းသို့ ရောက်သွားတော့သည်။ အမုန်းဘက် အခြမ်းတွင် ရောက်ရှိနေပါကလည်း မုန်းသည်။ မုန်းရင်း မုန်းရင်း နှင့် အမုန်းတွေ ဂိတ်ဆုံးသွားပါက အချစ်ဘက် အခြမ်းသို့ ရောက်သွားပါတော့သည် . . .
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 11:50 PM သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရည်ညွှန်း: love, ဒသန
တစ်ခါတုန်းက . . . .
အလုပ်တစ်ခု တည်းတွင် အတူတူ လုပ်လုပ်နေကြသော ကောင်လေး တစ်ယောက် နှင့် ကောင်မလေး တစ်ယောက်တို့ သည် မျက်လုံး ခြင်း စကားပြောလျှက်ရှိကြသည်။ သို့ သော်သူ တို့မျက်လုံး ထဲကစကားသံ များကား ပြင်ပသို့ ရောက်ရှိလာ ခြင်းမရှိကြ။ ဘာကြောင့်ပါလဲ...
အဲဒီအလုပ်မှာက တင်းကျပ်သော စည်းကမ်းတစ်ခုရှိသည်။ တစ်ရုံးချင်းရည်းစား မထားရ။ ထားလျှင် တစ်ယောက်ထွက်။ သူမျက်လုံးထဲက စကားတွေ အပြင် ထွက်မလာစေ သောအဓိက အကြောင်း အရင်းမှာ ကောင်လေးက ကောင်မလေးထက် အသက်အားဖြင့် လည်းကြီးသည်။ အလုပ်ထဲမှာ ရာထူးအားဖြင့်လည်းကြီးသည်။ ပိုဆိုးသည်က သူတို့ သည်အလုပ်ထဲတွင် ဆရာတပည့်ပုံ စံလိုဖြစ်နေသည်။ သို့ သော် အကင်းပါးသည့် ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်က သူတို့ မျက်လုံးထဲက စကားတွေကို ရိပ်မိနေသည်။ တစ်ရက်တွင် အဲဒီဝန်ထမ်းက သူတို့မျက်လုံးထဲက စကားတွေ ကိုထွက်ကျလာအောင် ညစ်ထုတ် ပေးလိုက်သည်
ဘယ်လို ညစ်ထုတ် ပေးခဲ့တာလဲ
တစ်ရက်တွင် ကောင်လေးက အလုပ်ကိစ္စနှင့် ခရီးသွားရသည်။ ခရီးသွားတော့ ကောင်မလေးက လွမ်းသလိုလို ဖြစ်နေသည်။ လွမ်းနေတာကို ရိပ်မိသည့် အကင်းပါးသော ၀န်ထမ်းက ကောင်မလေးကို စကားကြောင်း ကြည့်သည်။
အစ်မ သူ့ကို လွမ်းနေတာ မဟုတ်လား
ဟာ ပေါက်ကရ။ ဘာတွေ လာပြောနေတာလဲ။ တော်တော်နေ သူကြားသွားရင် နင့်ကို လက်သီးနဲ့ ထိုးလိမ့်မယ်။
အာဘယ်က ထိုးရမှာလဲ ဆုတောင်ချ နေမလားမသိဘူး
ဘာတွေ လျှေက်ပြောနေတာလဲ။ ငါကသူ့ကို မန္တလေးဖိနပ် မှာချင်တာ ငရဲကြီးမှာ စိုးလို့ မမှာလိုက်ရဘူး။ အဲဒါကိုစဉ်းစားနေတာ။
မှာမှ မှာလိုက်တာ ဘယ်လိုဝယ်လာမှာလဲ
အစ်မနဲ့ သူနဲ့က စိတ်ချင်းဆက်စပ်နေတာပဲ ၀ယ်လာမှာပေါ့။
တော်တော်နင်သွားတော့ စိတ်ညစ်ရတဲ့ အထဲ
ညပိုင်းရောက်တော့ ကောင်လေးက အလုပ်ကိစ္စအတွက် ရုံးကိုဖုန်းဆက်သည်။ အဲဒီမှာ စောစောက၀န်ထမ်းက ကောင်လေးကို မန္တလေးဖိနပ် တစ်ရန် ကောင်မလေး အတွက် ၀ယ်လာဖို့ မှာလိုက်သည်။ ကောင်လေးပြန်လာတော့ ကောင်မလေးအတွက် ဖိနပ်ပါလာသည်။
ဘယ်လိုလဲ အစ်မ ဖိနပ်ပါလာတယ်မဟုတ်လား
သေနာ နင်ပြောလိုက်တာ မဟုတ်လား
ဘယ်ကလာ။ သူကခရီးသွားနေတာ ဘယ်လိုပြောလို့ ရမှာလဲ။ စိတ်ချင်းဆက်စပ်နေလို့ ၀ယ်လာတာ ဖြစ်မှာပေါ့။
တော်တော့နော် နင့်အစ်ကိုကြားရင် နင်ကိုလာထိုး လိမ့်မယ်။
မိုးက သည်းထန်စွာ ရွာသွန်း လျှက်ရှိသည်။ ကောင်မလေး စိတ်ထဲမှာ စောစောက ၀န်ထမ်းကို မေတ္တာပို့ နေသည်။ သူ့ထီးကို ယူသွားပြီး စောစောပြန်လာ ပါလို့မှာ လိုက်သည့်ကြားက ပြန်မလာ။ ညနေက ခြောက်နာရီ ထိုးတော့မည်။ ထီငှားသွား သောဝန်ထမ်း ကပြန်မလာသေး။ ရုံးမှာ လည်းအာလုံး ပြန်ကုန်ကြပြီ။ တစ်ရုံးလုံးမှာ မိန်းကလေး ဆိုလို့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်သာ ကျန်တော့သည်။ အဲဒီအချိန် တွင်ကောင်လေးက ထီးကြီးအကြီးကို ဆောင်းကာ အပြင်သွားမလို့ ထွက်ခဲ့သည်။ ရုံးအပြင်ရောက်တော့ ငုတ်တုပ်လေး ထိုင်ပြီး မိုးစက်တွေကို ငေးနေသော ကောင်မလေးကို တွေ့လိုက်သည်။
ဟိုသေနာကောင် ထီးငှား သွားတာ ပြန်မလာလို့ စောင့်တာ
ဒါဆို အစ်ကို လိုက်ပို့ လိုက်မယ်လေ
ကောင်မလေးကလဲ နှစ်ခါမခေါ်ရ လိုက်လာသည်။ လမ်းအရောက်တွင်
အစ်ကိုညီ တွေကိုကြည့်ဆုံးမ ထားဦးနော်
အစ်ကိုနဲ့ ညီမနဲ့ ကိုစစ နေကြတယ်
ဘာလဲ။ ညီမက အစ်ကို့ညီတွေ စတဲ့ အတိုင်း အဖြစ်မခံနိုင်လို့လား
အလစ်ချောင်းနေသော အကြံသမားက ရတဲ့ အခွင့်ရေး တစ်ခုကို လက်လွတ်မခံပဲ အသုံးချလိုက်သည်။
ဟုတ်တယ် ညီမ ။ ညီမကို ......... ..................... ................. .................. ...............
နှစ်သုံးဆယ်ခရီး တစ်ကိုယ်တည်း ရွှက်လွင့်နေသော လှေကြီးတစ်စင်းသည် သိုင်းဖွဲ့ စွေစွာ ရွာလေသော မိုးတစ်ရက် တွင် မိုးဆိပ်ကမ်းသို့ ဆိုက်ကပ်သွားပါတော့ သည်။
ကောင်လေးသည် ရန်ကုန်မီဒီယာ ဂရု၏ ဒုတိယအယ်ဒီတာချုပ် စောလင်းအောင် ဖြစ်ပြီး
ကောင်မလေးသည် MRTV-4 Presenter ဂျူလှိုင်မိုး ဖြစ်သည်။
သူတို့ နှစ်ဦးသည် ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့က ဆန်းမစ်ပတ်ဗျူး တွင်လက်ထပ်သွားကြပါပြီ
အကင်းပါသော ၀န်ထမ်းဆိုသူကား ဘယ်သူဖြစ် မလဲလို့ ခန့်မှန်းကြည့်ကြပါ။
ကိုစောလင်းအောင် နှင့် မဂျူလှိုင် အိုအောင်မင်း အောင်ပေါင်းရပါစေ။ ဆုတောင်းပေးလိုက် ပါတယ်။ တောင်းပေးမှာ ပေါ့ခဲဖိုး ရထားတာကိုး
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 11:30 AM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ပန်ဒိုရာရဲ့ ဘလော့မှာ မူပိုင်ခွင့် အကြောင်းကို ရေးထားတွေ့တော့ ကျွန်တော်တို့ သင်တန်းတက်တုန်းက ဆရာ ပြောပြတဲ့ မြန်မာပြည်က မူပိုင်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တကယ်ဖြစ်ခဲ့ တဲ့အဖြစ်ပျက်လေးကို ဖောက်သည် ပြန်ချလိုက်ပါတယ်။
ဂျော်နီဝါးကား အရက်ကို တော့လူတိုင်းသိကြ ပါလိမ့်မယ်။ တုတ်ကောက်လေးနဲ့ တံဆိပ်ပေါ့ဗျာ။ မူပိုင်ခွင့်မှာတော့ Trade Mark လို့ ခေါ်တာပေါ့။ အဲဒီ Trade Mark ကို ယူပြီး မြန်မာပြည်က လူက ဂျော်နီဝါးကား သွေးဆေးလျှက်ဆား ဆိုပြီးထုတ်တယ်။
တစ်ရက်မှာတော့ ဂျော်နီဝါးကားရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံ ခြားသားက တရားလာစွဲတာပေါ့ဗျာ။ တရားရုံးမှာ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ပြန်အအလှန် လျှေက်လဲချက်တွေ တင်ကြငြင်းကြခုန်ကြပေါ့။
အဲဒီမှာ မြန်မာကလူက ပြောပါတယ်။ ဂျော်နီ ဆိုတာ သူ့ရဲ့ အဖိုးပါတဲ့။ တစ်လောကလုံးမှာ ဂျော်နီတွေ အများကြီးပဲဆိုပြီး ငြင်းချက်ထုတ်ပါတယ်။ သူ့အဖိုးလမ်းလျှောက်တဲ့ ပုံကို ကြည့်ပြီး ပုံဆွဲထားတာ နိုင်ငံခြားအရက်နဲ့ ထရိတ်မှတ်ချင်းသွား တူတာတော့ သူလဲမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့။
ဘယ်လိုပဲ ငြင်းငြင်း နောက်ဆုံတော့ နိုင်ငံခြားသားက အမှုနိုင်သွားပါတယ်။ သို့သော် အမှုနိုင်တဲ့ နိုင်ငံခြားသား မျက်ရည်လယ်ပြီး ပြန်သွားရပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ တရားရုံးက လျှော်ကြေးတောင်းလိုက်တာက ၂၀၀ ပါတဲ့။ ဒေါ်လာတောင် မဟုတ်ဘူးနော် မြန်မာငွေ။ အဲဒီတော့မှ မြန်မာက လူက ဒီလိုမှန်းသိရင် စောစောစီးစီး အပြစ်ကို ၀န်ခံလိုက်ပါတယ်တဲ့။
မူပိုင်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တချို့လူတွေ အပြင်မှာ ပြောသလို စာစောင်တချို့မှာ လည်းရေးတာတွေ့ရပါတယ်။ ဘာတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ မူပိုင်ဥပဒေ ပြဌာန်းပြီးက ကော်ပီသီချင်းဆိုသူတွေ အခက်တွေ့မယ် လျှော်ကြေးပေးရမယ် ဘာညာပေါ့။ တကယ်တမ်းကျ တော့မြန်မာ နိုင်ငံက အဆိုတော်တွေက သူတို့သီချင်းတွေကို ယူဆိုထားတာကို မူရင်း အဆိုတော်တွေက သိကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ပြီးတော့လဲ တရားစွဲတယ်ဆိုတာကလဲ သူ့တို့ရဲ့ အော်ရင်ဂျင်နယ် ခွေရောင်းအားကို ထိခိုက်ရင်သော် လည်းကောင်း စီးပွားအကြီးအကျယ်ဖြစ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ အသုံးချလျှင်သော်လည်းကောင်း ဖြစ်ပေါ်လာမှ လျှော်ကြေးတောင်း တရားစွဲတာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခွေတစ်ခွေရောင်းရလို့ ရတဲ့ အမြတ်က သူတို့ တရားလာစွဲရမဲ့ လမ်းစရိတ် နေစရိတ် စားစရိတ် တရားရုံးစရိတ် တွေကို တောင်ကာမိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဘယ်သူမှလဲ အားအားယားယား လာပြီးတရားစွဲနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 6:29 AM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ပိုက်ဆံလွှဲ အပိုင်းကတော့ ကိုရန်အောင်တို့ အဆင်ပြေသလို စီစဉ်ပါ။ နောက်တစ်ခု စဉ်းစားရမှာ။ တစ်ခြားတစ်နေရာကနေ ကိုကျော်ဇေယျ ဆီကိုပို့ရင် လွဲခတစ်ခါကုန်မယ်။ ကိုကျော်ဇေယျဆီကနေ ကျွန်တော့်ဆီကို ပို့ရင် လွဲခ တစ်ခါထပ်ကုန်မယ်။ အဲဒီတော့ အဆင်ပြေနိုင်ပါ့မလား။ အဆင်ပြေတယ် လို့ယူဆရင်တော့ လုပ်ကြတာပေါ့။ မပြေဘူထင်ရင်လဲ တစ်ခြားနည်း ထပ်စဉ်းစားတာ ပေါ့။
Fund ထည့်ပြီးမှ စာမူရွေးမှာလား. ဒါဆိုရင် ကိုယ့်စာမူပါရင် အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ မပါရင်တော့ ပိုက်ဆံကြီးပဲ ထည့်ထားရတယ်၊ ငါ့စာမူကျတော့ မပါဘူး ဆိုတဲ့ ပြဿနာလေးတွေ ပေါ်လာနိုင်တယ်
ဒါကတော့ အရှေ့မှာလဲ ကျွန်တော်တို့ အကြိမ်ကြိမ် ပြောပြီးပါပြီ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ ဘလော့ဂ်ကာ အားလုံးနီးနီးရဲ့ ပို့တွေကို ပါဝင်စေချင်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံထည့်တဲ့လူ ကတော့ ဦးစားပေးထည့်ပေး ရမှာပေါ့။ ဒီလိုဆိုရင် ကွာလတီ ကျသွားမလားလို့ မေးစရာရှိပါတယ်။ အဲလို ကွာလတီမမှီတဲ့ စာမူဖြစ်နေရင်လဲ စာမူရှင်ကို အကြောင်းကြားပြီး ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်တာ မျိုးလုပ်ပါမယ်။ ဒါကြောင့် စာမူပေးပို့ သူများရဲ့ မေးတွေကို အချိန်မရွေးဆက်သွယ် နိုင်ဖို့ရာ ပေးထားဖို့လိုသလို။ စာအုပ်ဖောင်ပိတ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာလဲ အချိန်မရွေး မေးကို စစ်ပေးနေဖို့လိုပါတယ်။ တကယ်လို့များ စာမူရဲ့ တစ်စိတ်တပိုင်းကို ဖြစ်ဖြစ် တစ်ပုတ်လုံး ကိုဖြစ်ဖြစ် ဖြုတ်ခိုင်းတဲ့ အခါကျရင် ဖြုတ်တဲနေရာနဲ့ အဆက် စပ်မိအောာင် သို့မဟုတ် အခြားတစ်ပုဒ် အစားထိုးနိုင်အောင် စာမူရှငိကို ဆက်သွယ်ဖို့လိုပါတယ်။
ဈေးနှုန်းကတော့ဗျာ ကြားရတာ ကောလဟာလ ဖြစ်ပါစေလို့တောင် ဆု တောင်းနေရပါတယ်။ ပြည်ပသွင်းကုန် အခွန်ကို ၄ ဆတိုးမယ်လို့ ကြားနေရတယ်။ တကယ်လို့ တိုးဖြစ်ရင် ဒီတစ်လနှစ်လ အတွင်းမှာ ဖြစ်မယ်လို့ ပြောသံကြားနေရပါတယ်။ လောလော ဆယ်မြန်မာ နိုင်ငံမှာ တီဗီတစ်လုံးကို အခွန် လေးသောင်ကျပ် ကောက်ပါတယ်။ တိုးလိုက်ရင် ၁၆၀၀၀၀ ကျပ်က အခွန်ပေးရပါမယ်။ ဒါကြောင့် အခု လောလော ဆယ်အကြမ်းဖျင်းဈေးကို ကျွန်တော် ထပ်တွက် ပေးပါမယ်။ အဲဒီကောလဟလ တာတကယ် ဖြစ်လာရင် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဘယ်လောက် ဆက်တက်မယ် ဆိုတာကို မမျှော်မှန်းနိုင်ပါဘူး။
အခုအနေထား တိုင်းဆိုရင် ဖန်ထည့်တဲ့ လူတွေမှာ အမာခံနဲ့ အလှုသက်သက် ဆိုပြီး နှစ်မျိုးကွဲသွားမဲ့ သဘောရှိနေပါတယ်။ အလှုသက်သက်ကတော့ သဒါသလောက် ထည့်ဝင်ကြမှာပါ။ ဘယ်လောက်ရယ်လို့ သတ်မှတ်ချက် မရှိပါဘူး။ သူတို့ အနေနဲ့ ပေးသမျှအားလုံးသည် လှုပြီးသားဖြစ်ပါသည်။
အမာခံကတော့ ရတဲ့ အလှုငွေတွေကို ကြည့်ပြီး ဘယ်လောက်စိုက်ရမလဲ ဆိုပြီး စိုက်ထုတ်ပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှ တစ်ခုပြောချင်တာက ကိုဇင်ကိုလတ် ပြောသလို အားလုံးက ဝေသံသယာ တွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် စာအုပ်ပြန် လည်ရောင်းချ ပြီးတဲ့ အခါမှာ အမြတ်ရခဲ့တယ် ဆိုရင် သူတို့ စိုက်ထားတဲ့ ထဲက အရင် တချို့တစ်ဝက်ကို ပြန်လည်ရရှိ ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ တစ်သိန်းစိုက် ထည့်ထားခဲ့ရရင် သူပြန်ရတာ ခုနှစ်သောင်းဖြစ် ချင်ဖြစ်မယ်။ ငါးသောင်းဖြစ် ချင်ဖြစ် မယ်။ ဒီသဘောမျိုးပါ။
အလှုသက်သက် ငွေကိုတော့ ဧပြီလ ပထမပတ်ပတ်မှာ နောက်ဆုံးပိတ်လိုက် ရင်ကောင်းပါတယ်။ အာလုံး သဘောတူညီရင် တတည်ပြုပါမယ်။
အမာခံတွေကတော့ အလှုသက်သက် ထည့်ဝင်သူများနှင့်အတူ ဧပြီလပ ပထမပတ်မှာ ပထမရစ်ကို ထည့်ဝင်ရပါမယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ စာအုပ်ရုံးတင် တဲ့တဲ့အခါ မှာ စရိတ်စက ကုန်ကျတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ကွန်ပျူတာ ဒီဇိုင်နာ ထုတ်ဝေသူ ကဒ်ငှားခ ရုံးတင်စားရိတ်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကုန်ကျ စရိတ်တွေကို အလှုသက်သက် ထည့်ဝင်သူများထံမှ ရငွေနဲ့ လုံလောက်မယ်လို့ မမျှော်မှန်းလို့ မရပါဘူး။
ဘာကြောင့် အမာခံတွေကို တဘရိတ်ထဲ မကောက်တာလဲ ဆိုတော့ ရုံးတင်ပြီး ရုံြးုပန်ကျချိန်ဟာ တစ်လခွဲ ကနေ နှစ်လ ၀န်ကျင်လောက် ထိကြာမြင့်တတ်ပါတယ်။ စာအုပ်ကို ပုံနှိပ်စက်ပို့တာက ရုံးပြန်ကျပြီး ဖြုတ်ခိုင်းတာ ဖြုတ် ပြီးမှ အချောကိုင် ပုံနှိပ်ရပါတယ်။ ကုန်ဈေးနှုန်းဆိုတာ ကလဲ သိတော်မူကြတဲ့ အတိုင်းပဲ စာအုပ်ရုံးပေါ်တက်နေ ချိန်မှာ ပြောင်းလဲ နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် စရိုက်တော့ မယ်ဆိုမှ လိုတဲ့ ကုန်ကျ စရိတ်ကို အမာခံတွေ မျှပြီးထပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ် မှာ အမာခံက ခြောက်ယောက်ရှိနေပါပြီ။ အမာခံတွေ များလေ တစ်ဦးချင်းစိုက် ထည့်ရမဲ့ ငွေကနည်းလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အမာ ခံများကို ထပ်ပြီး ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 5:44 AM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
မင်းသားပုံပါတယ် သေချာကြည့် :D
သူငယ်ချင်း တစ်ချို့လာလာ မေးမေးကြတဲ့ မေးခွန်းလေးကို ပြန်ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ။ပထမဆုံးလုပ်ရာမှက www.photbuckup.com မှာသွားပြီး register လုပ်ရပါမယ်။
၂။ ။register လုပ်ပြီးသွားရင် ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံးလေးတွေကို Upload လုပ်ရလိုက်ပါ။
၃။ ။ဓာတ်ပုံတွေ Upload လုပ်ပြီးရင်My Alban ကိုသွားပါ
၄။ ။ပြီးရင် ကိုယ်စောစော ကတင်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကို တွေ့နေရပါပြီ။
အဲဒီဓာတ်ပုံလေးတွေရဲ့ အပေါ်မှ Side Show ဆိုတာကိုသွားပါ။
၅။ ။ ပြီးရင် Createanew site show ဆိုတာကိုရွေးပါ
၆။ ။ မိမိပါလိုတဲ့ ပုံလေးတွေကို + လေးပါတဲ့နေကို ကလစ်လုပ်ပြီး ထည့်ပါ
၇။ ။အပေါ်မှာ ရှိတဲ့ Basic, Social , Seasonal တို့ကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု နှိပ်ကြည့်ပါ။ အေက်မှာ နမူနာလာ ပြပါလိမ့်မယ် မိမိစိတ်ကြိုက် တစ်ခုကိုရရင် Save Sideshow ကိုရွေးလိုက်ပါ။
၈။ ။ ပြီးရင် ဓာတ်ပုံတွေကို ရှဲလုပ်မှာလားလို့ လာမေးပါလိမ့်မယ်။ မလုပ်တော့ ဘူးဆိုရင် Back ကို ကလစ်လုပ်လိုက်ပါ။
၉။ ။ ပြီးသွားရင်တော့ ကိုလုပ်ထားတဲ့ ဆိုက်ရှိုးလေးကို နမူနာမြင်တွေ့နေရပါပြီ။ အဲဒီကပေးထားတဲ့ HTML ကုဒ်ကို ကိုတင်းပလိတ်ရဲ့ ကိုထည့်ချင်တဲ့ နေရာမှာ ထည့်လိုက်ရုံပါပဲ။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 12:47 AM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 4:30 AM0ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
မိတ်ဆွေ သင့်ဘ၀မှာ အနည်းဆုံးတော့ ဘဲဥတစ်လုံးထက် မနည်းကြော်ခဲ့ဘူးမှာပါ။ ဘဲဥကို ကြော်ရတာခက်သလား သို့တည်းမဟုတ် လွယ်တယ်လို့ ထင်မိပါသလား။
ကျွန်တော်ကိုတိုင်လဲ ဘ၀မှာ မရေမတွက်နိုင်လောက်တဲ့ ဘဲဥအလုံးပေါင်းများစွာကို ကြော်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ အခက်ခဲမရှိခဲ့ပါဘူး။ ရသ လည်း မြောက်လိမ့်မယ်လို့ မထင်ခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်......... ။ ဒီတစ်ခါကျော် တဲ့ဘဲဥကတော့ ရသ မြောက်သွားတယ်။ အခက်ခဲများကြားက အခဲရာခဲဆစ် ကျော်ရတယ်လို့လဲ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ဟာ အဲဒီဘဲဥကို ဒယ်အိုးနဲ့မကြော်ပဲ ငါးဆင့်ဂျိုင့်သုံးပြီး ယရစ်(ြ- ) မဟုတ်ပဲ ယပင်း ( -ျ) သုံးကာ ကျော်လိုက်မိလို့ပါ။
အဲဒီဇာတ်လမ်းကို ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ် ၀န်းကျင် လောက်ကပါ။ ဇာတ်လမ်းလေးကို ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဇာတ်လမ်းမှာ ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ ငါးဆင့်ဂျိုင့်ကြီး ကနေစရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ အချိန်ပိုဆင်းရတဲ့ ညတွေမှာ စားဖို့ဆိုပြီး စီအီးအို ရဲ့ ဇနီးကနေ ငါးဆင့်ဂျိုင့်ကြီးနဲ့ ဟင်းတွေပို့ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ရုံးဆိုတာတော့ ထုံးစံအတိုင်း ပေါ့ဗျာ။ စားကြတယ် သောက်ကြတယ်။ ကုန်သွားရင် ပစ်ထားတယ်။ ဂျိုင့်ကိုဆေးချင်တဲ့လူ မရှိဘူး။ သူအရင်စားတယ် ငါနောက်မှ စားတယ်။ ဘာညာကိကွ ဆိုပြီး မကြာခဏဆိုသလို ဂျိုင့်ဆေးတွက် ကြတဲ့ပြသနာက ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီဂျိုင့်ကြီးဟာ အမြဲတမ်းညစ်ပတ် နေတာပေါ့။ တစ်ရက်မှာ အဲဒီဂျိုင့်ကြီးက ကျွန်တော်ကို ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် ဖန်တီးပေးခဲ့တယ်။
အဲဒီနေ့က တနင်္ဂနွေနေ့။ ဖေဖော်ဝါရှီလရဲ့ အလယ်ပိုင်းလောက်။ ကိုးနာရီလောက် ဆိုတာနဲ့ အပြင်ထွက်ချင်စရာ မကောင်းလောက်အောင် နေအရှိန်က ပြင်းနေပါပြီ။ ရုံးက ကောင်မလေး တစ်ယောက်ရဲ့ အဖွားလလယ် ဆွန်းကျွေးတာကို ကျွန်တော်က သွားရမှာ။ ဟိုမှာ ကျွေးမှာက ဘာမှန်းမသိသေးဘူး ရုံးက ကိုတော်ချော်တွေ ငတ်ကြီးကျ ကြတယ်။ အပြန်မှာသူတို့ အတွက်ပါဆယ် ဆွဲခဲ့ရမယ်တဲ့။ ငတ်ကြီးကျတဲ့ လူက ကိုယ့်ဆရာဖြစ်နေပြန်တော့ ပြန်ပြောလို့က မကောင်းပြန်ဘူး။ ဟေ့ကောင် မင်းဒီဂျိုင့်ကြီးယူသွား အပြည့်ထည့်လာခဲ့တဲ့။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆွမ်းကျွေးသွားတာဆိုတော့ လူလိုသူလိုလေးတော့ ၀တ်စားသွားမှ ဖြစ်မှာပေါ့။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီရက်က မီးပျက်တယ်။ ပိုးပုဆိုးက မီးပူမတိုက်ရသေးဘူး။ ရှိစေတော့ ဘယ်သူမှ ဂရုစိုက်လိုက်ကြည့်နေမှာ မဟုတ်ဘူး။ အကြေအတိုင်းပဲ ကောက်ဝတ်လိုက်တယ်။ အစကတော့ ကားငှားသွား မလို့ပါပဲ။ ရုံးအရှေ့မှာ ဘယ်ကရောက်နေတဲ့ စက်ဘီမှန်း မသိဘူး ရပ်ထားတာကို တွေရတယ်။ သွားရမဲ့နေရာက ကမ္ဘာအေး ဘုရားရဲ့ အရှေ့ဘက်က ရေစက်ဝင်းကြီးနားမှာ။
ပြောမယ့်သာပြောရတာ စက်ဘီးမစီးရတာကလဲ တော်တော်ကြာနေပြီ။ ရန်ကုန်ရောက် ကတည်းကဆိုပါတော့။ တာမွေအ၀ိုင်းထိပ်နဲ့ ကမ္ဘာအေး ဘုရားဆိုတာကလဲ ဘာဝေးလို့လဲ။ တောမှာတောင် စီးနေသေးတာ ရန်ကုန်လို ကတ္ဘရာလမ်း ဖြေင့်ကြီးမှာ ဆိုတော့ အေးဆေးပေါ့လို့ တွက်ပြီး စက်ဘီးနဲ့ ထွက်ချလာခဲ့တယ်။ အသွားခရီးကတော့ တာမွေအ၀ိုင်းထိပ်ကနေ ဦးချစ်မောင်လမ်း အတိုင်း စီဒိုးနာ ဟိုတယ်ဘေးကနေ ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းကိုတက် ကမ္ဘာအေးရားလမ်းတိုင်း ဆွမ်းကျွေးရှိတဲ့ အိမ်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာ။ ခရီးတစ်လျှေက်ကတော့ အိုကေစိုပြေနေတာပါပဲ။ ဆွမ်းကျွေးအိမ်ရောက်တော့ ကြက်သားပလာတာ ကျွေးတယ်။ စက်ဘီးနင်းထားတဲ့ အရှိန်နဲ့ ဆိုတော့ စားကောင်းကောင်းနဲ့ စားလိုက်တာ စားပို့မနင်ရုံတမယ် ပေါ့။ ဖရီးကျိတ်ရတာဆိုတော့လဲ စားနိုင်တာပေါ့လေ။ စူစကာ ပုံဏားလေး စားပြီးသကာလ ရုံးတွင် ကျန်ရစ်ခဲ့သော စူစကာပုံဏားကြီးများ မျိုဆို့ဖို့ ရာအတွက် ရုံးက ကောင်မလေးက ငါးဆင့်ဂျိုင့်ကြီးနဲ့ အပြည့်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အပြန်ခရီးကတော့ ဘိုက်ကလေး ဂျိုင့်ကလေးနဲ့ အလာခရီးလောက်တော့ အဆင်မပြေဘူးပဲ ပြောကြပါစို့ . . . .
ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းအတိုင်း စက်ဘီးကိုနင်းရင်း လက်တစ်ဘက်က ဂျိုင့်ကြီးကို မနိုင်တနိုင်ဆွဲလာသူ ကတော့ ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ ဇာတ်လိုက်မင်းသား ကျွန်တော်ပေါ့ဗျာ။ ချောတွင်းကုန်း မီးပွိုင့်ကို ဖြတ်ပြီးတဲ့ အထိကတော့ အိုကေပဲ။ ပြသနာက မဖြစ်သေးဘူး။ ပြသနာက သစ္စာလမ်းနဲ့ ကမ္ဘာအေးဘုရား လမ်းထောင့် မြကျွန်းသာ မီးပွိုင့်မှာ မော်တော်ပီကယ်နဲ့ တိုးတော့တာပဲဗျာ။ အချိန်က နေ့လယ် ၁၁ နာရီခွဲလောက်။ ကျွန်တော့စက်ဘီးကို တားပြီးမင့်ကို ဖမ်းလိုက်ပြီ။ စက်ဘီးထားခဲ့။ ဒါဏ်ငွေ ၅၂၀၀ ကို ကုက္ကိုင်းရုံးချုပ်မှာ သွားဆောင် ချလန်ယူပြီးမှ စက်ဘီကို ပြန်လာယူတဲ့။ သေပီဆရာရေ။ အဲဒီခေတ်က ကားငှားသွားရင်တောင် အသွားအပြန် သုံးထောင်ပေးရမှာ မဟုတ်ဘူး။ အခုတော့ လူလဲပင်ပမ်း ပိုက်ဆံလဲကုန် ဖြစ်တော့မှာပဲ။ အင်း........ ပိုက်ဆံတော့ အကုန်ခံလို့ မဖြစ်ချိမ့်ဘူး။ နည်းလမ်းရှာလေမှ။ အနာဂတ်မှာ ကုလသမ္မက အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ရွေးကောက်ပွဲ တောင်ဝင်နွဲမဲ့ ဦးနှောက်ပဲ မော်တော်ပီကယ် လောက်ကိုမှ စကားစစ်ထိုး မနိုင်ရင် ရာဇ၀င်ရိုင်းရော့မယ် ထွက်စမ်းဟဲ့ ဥာဏ်နီ ဥာဏ်နက်တွေ။
ကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့ ပိုးပုဆိုးကြီးက နေရောင်မှာ ကိုရောင်ကို ၀ါတွေတောက်လို့။ စက်ဘီနင်းထားရတာကြောင့် ချွေးတွေကလဲရွှဲလို့။ ပိုးဆိုးအကြေကြီးကိုဝတ် ကတီဖိန်ပ်ထိပ်လန်ကိုစီး တီရုပ်အပြာရောင် လက်ထဲမှာကလဲ ဂျိုင့်ကြီးအကြီးကို ကိုင်ထားပြန်တော့ တောသားပုံ ပေါက်နေမှာတော့ သေချာလို့ပေါ့ဗျာ။ အင်းဒီမော်တော်ပီကယ်ကို အရူးကွက်နင်းမှ ဖြစ်တော့မယ်။
မော်တော်ပီကယ်က လှမ်းအော်ပြောလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ စက်ဘီးကို ယူထားပြီးကြပြီ။ ကျွန်တော် မျက်နှာလေးကို အတတ်နိုင် ငယ်နိုင်သမျှငယ် အောင်ငယ် ထားလိုက်တယ်။
မလုပ်ပါနဲ့ ဆရာရယ်။ ကျွန်တော့ အစ်မဆေးရုံတက်နေတာ ထမင်းဂျိုင့်သွားပို့ ရမှာမို့ပါ။
အလုပ်သမား ဆေးရုံးကြီးမှာ တက်နေတာပါဆရာ။ ခဏနေဆိုရင် ဆရာဝန်ကြီး ရောင်းလည့်တော့မှာ။
ရပါတယ် ကိစ္စမရှိပါဘူး။ စက်ဘီးကို ထားခဲ့လိုင်းကား စီးပြီးသွား နောက်တော့ မှလာရွေး။
အော်တော်တော် ပြောရကြတ်တဲ့ လူပါလား။ ဖြစ်နိုင်ရင် နားရင်ပါးရင်းတာ ရိုက်လိုက်ချင်တယ်။ သို့သော် ရိုက်လို့ မဖြစ်သေး စက်ဘီးလေးကို ဒါဏ်ငွေ မဆောင်ပဲရအောင် ပြန်တောင်းဦးမှ
မလုပ်ပါနဲ့ ဆရာရယ် ကျွန်တော့်မှာ စက်ဘီရွေးရအောင် ပိုက်ဆံလဲမရှိပါဘူး။
ရတယ်။ မင်းပိုက်ဆံ အဆင်ပြေတဲ့နေ့မှ လာရွေး မင့်စက်ဘီးကို မပျောက်စေရဘူး။
မဟုတ်ဘူးဆရာ။ အဲဒါကျွန်တော့စက်ဘီး မဟုတ်ဘူး။ လမ်းထိပ်က ကွမ်းရာဆိုင်က ငှားလာတာ။ ပြန်လာလို့ စက်ဘီးပါမလာရင် ပြသနာတက်မှာပေါ့။
အင်း မော်တော်ပီကယ် လေသံနဲနဲပျော့သွားသလိုပဲ။ ဒါပေမယ့် ကရုဏာသံ ထွက်မလာသေးလာဘူး။ ထွက်အောင်လုပ်ဖို့ ကျွန်တော်မှာက တာဝန်ရှိသေးတယ်။ ဒါမှလဲ စက်ဘီးလေး ပြန်ရမှာကိုး။
ကမ္ဘာအေးဘုရားရဲ့ အရှေ့ဘက်က ရေတွန်းစက်ရုံကြီး နားလေးမှာနေတာပါဆရာ
ဟာတော်တော် ဝေးတာပဲကွ။ အဲလေက်အဝေးကြီးကို စက်ဘီးနဲ့ သွားရတယ်လို့။
ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းပေါ်မှာ စက်ဘီးမနင်းရဘူး ဆိုတာမင်းမသိဘူးလား
ဆရာရယ် အစ်မဆေးရုံတက်နေရတယ် ဆိုလို့ နယ်ကနေလိုက်လာတာ ၁၅ ရက်လောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဒီလမ်းမှာ စက်ဘီးမစီးရဘူး ဆိုတာ ဘယ်လိုလုပ် သိမှာလဲ။ နောက်ဆိုရင် ဒီလမ်းမှာ မစီးတော့ပါဘူးဆရာ။ ဒီတစ်ခါတော့ ခွင့်လွတ်ပေးပါ။
နောက်မစီးတော့ ဘူးလို့ ပြောလို့ရမလားကွ။ မင်းကို လွတ်ပေးလိုက်ရင် နောက်လူတွေကို ဘယ်လိုဖမ်းမလဲ။
မော်တော်ပီကယ်က ကျွန်တော့်ကို ဂရုဏာဒေါသသံနှင့်ပြောသည်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဂိတ်တဲ အတွင်းမှာ ထိုင်နေတဲ့ မော်တော်ပီကယ် တပည့်လေးနှစ်ယောက်ကလဲ ကျွန်တော့ကို သနားနေပုံပေါ်သည်။ သူ့ဆရာကို ခွင့်လွတ်ပေးလိုက်ပါ ဆိုတဲ့ အကြည့်မျိုးနဲ့ ကြည့်နေကြသည်။ အင်းအခြေအနေ သိပ်မဆိုးဘူး။ ဆက်ကြိုးစားပေ ဦးမှ
မင်းကို အိမ်ကလူတွေက ဒီလမ်းပေါ်မှာ စက်ဘီးစီးလို့ မရဘူးလို့ မမှာလိုက်ဘူးလား။
လုပ်ပါဆရာရယ် ကျွန်တော်ထမင်းပို့ နောက်ကြနေပြီ
ခက်တာပဲကွ။ မင့်ကို လွတ်ပေးတာ အရေးမကြီးဘူး နောက်လူတွေကို ဘယ်လိုဖမ်းမလဲ
ကျွန်တော့ စကားပင် မဆုံးသေး မော်တော်ပီကယ် လမ်းပေါ်ဆင်းသွားပြီး ခရာတွေမုတ်နေသည်။ ကျွန်တော်က တော့ဂိတ်တဲလေးဘေးမှာ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ရပ်လို့ပေါ့။
ခဏလောက်ကြာတော့ မော်တော်ပီကယ် လမ်းပေါ်ကနေ ဂိတ်တဲဆီသို့ ပြန်လာသည်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့ကို ကြည့်ပြီး
ဟေ့ ထမင်းပို့ နောက်ကြနေတော့မှာ ဆို မသွားသေးလူးလား။
မော်တော်ပီကယ်က ကျွန်တော့ကို နှင်လေပြီ။ အင်းခဲလေသမျှတော့ သဲရေကျပါပြီ။ ဖွတ်မရ ဓားမ ဆုံး။ ပိုက်ဆံ ငါးထောင်နှစ်ရာလေး သက်သာမလားလို့ တော်ကီတွေ ပစ်လိုက်မိပါတယ်။ လေပါ အဆစ်ထပ်ကုန်သွားတယ်။
ကျွန်တော် ဂျိုင့်လေးဆွဲပြီး ပလက်ဖောင်းအေက်သို့ ဆင်းကာ သွားဖို့ ပြင်လိုက်သည်။ အင်းလေ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ လိုင်းကား စီးပြန်ရုံပေါ့။
ပလက်ဖောင်း အောက်ရောက်တော့ .........
ဟေ့ ကောင်စက်ဘီး မယူတော့ဘူးလား
ကျွန်တော်လဲ ဂိတ်တဲ ဘေးမှာ ထိုးထားတဲ့ စက်ဘီးလေးကို ချက်ချင်းပဲ တက်ယူလိုက်သည်။ ပြီးတော့ စီပြီး ထွက်ဖို့ အရှိန်ယူနေတုန်း
မဟုတ်ဘူး။ ဒီလမ်းအတိုင်း စီးသွားရင် ရုံးချုပ် အရှေ့တည့်တည့်ရောက်သွားလိမ့်မယ် အဲဒီနေရာက ဖမ်းရင် မင်းကို ဘယ်သူမှ ကယ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး
ဒီလမ်း အတိုင်း သွား။ လမ်းဆုံ ရောက်ရင် ယာကို ကွေ့ ပြီးရင် တာမွေ အ၀ိုင်းထိပ်ကို ဘယ်လိုသွားရတာလဲ လို့မေး။ တာမွေ အ၀ိုင်းကျော်ရင် ဆေးရုံရောက် ဖို့နီးသွားပြီ ...........
အဲဒီအဖြစ်တွေ ဖြစ်ပြီး သုံးလခန့် အကြာ။
၅၁ လမ်း ကြိုးမဲ့ကြေးနန်းနှင့်ယာဉ်ထိမ်းတပ်ဖွဲမှူးရုံးကို အထက်ပါ သုံးရစ် အဆင့်ရှိ မော်တော်ပီကယ် သတင်းလာပို့ရန် ရောက်ရှိနေခိုက်၊တပ်ဖွဲ့မှူရုံးခန်းထဲသို့ မြင်လိုက်သည်နှင့် ကြွေသွားလောက်အောင် ဣဒြေရရနှင့် သူ့အရှေ့က ဖြတ်လျှေက်ဝင်သွားတဲ့ လူငယ်တစ်ဦးကို အရင်က ရင်းရင်း နီးနီး မြင်ဖူးသလိုလိုပဲ ဆိုတဲ့ အကြည့်နဲ့ အဆိုပါ မော်တော်ပီကယ် ငေးမောကာနေလေတော့သည်။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 3:46 AM 1 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ